I-insulin esebenza ngokufushane: indlela yokusebenza, izinhlobo zezidakamizwa, indlela yokusebenzisa > Insulin
Ama-insulin asebenza ngokufushane: amagama izidakamizwa ezihamba phambili
Ukulungiswa kwe-insulin kuyingxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi kohlobo lwe-insulin oluza-insulin noludinga insulin 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela. Enye yezinkinga eziyingozi zalesi sifo yinhlekelele ye-hyperglycemic. Ukwelashwa okufakwe esikhundleni se-insulin okufushane kukuvumela ukuba ulondoloze izinga elijwayelekile leglucose, ugweme imiphumela emibi.
Ukuphazamiseka kwemetabolic kubangela ukuphazamiseka ezinqubweni zokuthathwa koshukela nokuqunjelwa. Ngokuvamile, kusebenza njengomthombo wamandla womzimba. I-insulin yi-hormone ekhiqizwa ama-pancreas ebandakanyeka ekusakazweni nasekuthuthweni kweglucose. Esikhathini sikashukela, uhlelo lwe-endocrine alukwazi ukulubumba ngamanani anele.
I-insulin efakwayo eyenziwe kafushane yasungulwa eminyakeni engama-20 eyedlule. I-analogue yama-hormone abantu itholakala ngezindlela ezimbili. Owokuqala ngokusebenzisa ubunjiniyela bezakhi zofuzo: ukwakheka kwamagciwane aguqulwe izakhi zofuzo nokwakheka kwehomoni evela ku-proinsulin ethathwe kubo. Okwesibili ukukhiqizwa kwehomoni esekwe kwi-insulin yezilwane - ingulube noma i-bovine.
Ngemuva kokuphatha, i-insulin emfushane ibopha ama-receptors kulwelwesi lweseli, bese ingena. I-hormone isebenza izinqubo ze-biochemical. Lokhu kubonakala ikakhulukazi kumaseli ancike ku-insulin wesibindi, i-adipose nezicubu zomzimba.
I-insulin ilawula imetabolism, ithinta ushukela wegazi. I-hormone ibandakanyeka ekuhambeni kwe-glucose ngokusebenzisa ulwelwesi lweseli, ikhuthaza ukuguqulwa koshukela lube amandla. IGlycogen yakhiwa kusuka kushukela esibindini. Lesi senzo se-insulin siholela ekunciphiseni kwe-glucose yegazi, evimbela ukuqhubeka kwesifo sikashukela kanye nokuvela kwe-hyperglycemia.
Isikhathi sokumuncwa kanye nesenzo se-insulin kuya ngesiza somjovo, umthamo kanye nokuxhunywa kwekhambi. Futhi, ukuhamba kwegazi nezwi lemisipha kuthinta inqubo. Umphumela wezidakamizwa uncike ezicini ezithile zesiguli ngasinye.
Ukwethulwa kwe-insulin kuvumela abanesifo sikashukela ukuthi balawule isisindo somzimba, kusebenze amandla we-metabolism, futhi kuvimbele ukuvela kwezinkinga kusuka ezinhlelweni zenhliziyo nezinzwa.
Izinhlobo zokulungiselela i-insulin
Ukulungiselela kwe-insulin kuyahluka ngokuya ngesikhathi sokutholwa esiswini sokuthambisa nesenzo. Ama-insulin amade ayakwazi ukwenza ngokweqile ukugcwala kweglucose egazini kungakapheli izinsuku eziyi-1-1,5, ngokwenza i-hormone eyisisekelo engahlangene nokudla.
Umphumela ofanayo ukhiqizwa izidakamizwa zesikhathi esiphakathi. Umphumela wabo ubonwa ngemuva kwamahora angu-1 - 4 futhi uthatha amahora angama 12-16.
I-insulin ebamba amafushane inciphisa ukugcwala kweglucose egazini, ilingisa ukukhishwa kwehomoni ehambisana nokudla kokudla. Kwethulwa uhhafu wehora ngaphambi kokudla. Izindlela zesenzo se-ultrashort zingumphumela oshesha kakhulu.
Izici zokulungiselela kwe-insulin kuya ngesikhathi sesenzo
Ukuqala kokusebenza ngemuva kokuphatha (amaminithi)
Umsebenzi ophakeme ngemuva komjovo (amahora)
I-Ultrashort I-Humalog, Apidra 5–20 0,5–2 3–4
Kafushane I-Actrapid NM, Humulin R, Insuman 30–40 2–4 6–8
Okuphakathi I-Protafan NM, Insuman 60–90 4–10 12–16
Isikhathi eside ILantus, Levemir 60–120 − 16–30
I-insulin emfishane ingakhiwa ngozalo (i-Actrapid NM, i-Rinsulin R, i-Humulin Regula), i-semi-synthetic (Humudar R, Biogulin R) noma ingulube (i-Actrapid MS, iMonosuinsulin MK).
Udokotela unquma uhlobo nomuthi womuthi, ecubungula izici ezihlukile zesiguli, iminyaka, izinkomba kanye nesimo salesi sifo. Ngaphambi kokusebenzisa i-insulin, qiniseka ukuthi ufunda imiyalo.Ama-insulin amafushane angabekwa njenge-monotherapy noma ahlanganiswe nezidakamizwa ezisebenza isikhathi eside.
Umthamo wansuku zonke we-insulin esebenza ngokufushane kubantu abadala iyunithi ezingama-8-24, ezinganeni - akukho ngaphezu kweziyunithi ezingama-8. Ngenxa yokukhishwa okwandayo kwe-hormone yokukhula egazini, umthamo wabantu abasha uyandiswa. Isiguli sikwazi ukubala ngokuzimela umthamo. Umthamo owodwa we-hormone uqukethe umthamo odingekayo ukuhlanganisa iyunithi yesinkwa, nomthamo wokunciphisa ukugcwala kweglucose egazini. Zombili izakhi zilingana no-zero. Kwabanesifo sikashukela esinesisindo eseqile, isilinganiso esincishisiwe sincishiswa ngo-0,1, ngesisindo esinganele sandiswa ngo-0.1. Kuthathwa umthamo we-0.4-00 U / kg kwiziguli ezinesifo sikashukela esisanda kutholwa. Ngokuya ngohlobo lomuthi, kungawuthwa umjovo ongu-1 kuya ku-6 ngosuku.
Umthamo ungalungiswa. Ukukhuphuka kwayo kuyadingeka ngokumelana komuntu ngamunye ne-hormone, kuhlangene ne-corticosteroids, izindlela zokuvimbela inzalo, ama-antidepressants kanye nama-diuretics.
Umuthi uphathwa kusetshenziswa isirinji noma ipampu ye-insulin ekhethekile. Umshini onjalo uvumela inqubo ukuthi yenziwe ngokunemba okukhulu, okungenziwa nge-syringe evamile. Ungafaka kuphela isixazululo esicacile ngaphandle kokudwayizela.
I-insulin esebenza ngokubambisana ifakwa imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ngaphambi kokudla. Ngemuva komjovo, musa ukweqa ukudla. Ukuphaka ngemuva kokunikwa umthamo ngamunye kufanele kufane. Ngemuva kwamahora ama-2-3 ngemuva kokuthatha isidlo esikhulu, udinga ukuthi ube nokudla okulula. Lokhu kuzosiza ukugcina amazinga kashukela egazini.
Ukusheshisa inqubo yokufakwa kwe-insulin, indawo ekhethiwe kufanele ifudunyezwe kancane ngaphambi kokujova. Indawo yomjovo ayikwazi ukugcotshwa. Umjovo wenziwa ngokungenasici emgodini wesisu.
Ngokukhula kokuhlushwa ushukela wegazi, kutholakala umthamo owengeziwe we-insulin noma ngabe kunjani.
Kunconywe i-glucose Insulin Dose
Ukusikisela Ushukela (mmol / L)
Idosi (U) 1 2 3 4 5 6 7
I-insulin ebamba amafushane ihlala isetshenziselwa abasubathi ababandakanyeka ekwakheni umzimba. Umphumela wesidakamizwa uyalingana nomphumela wabenzeli be-anabolic. I-insulin emfushane isebenzisa amandla okuhambisa ushukela kuwo wonke amaseli omzimba, ikakhulukazi izicubu zomzimba. Lokhu kufaka isandla ekukhuphuleni nasekugcinweni kwethoni yemisipha. Kulokhu, udokotela usetha umthamo ngamunye. Inkambo yokwamukelwa ihlala izinyanga ezi-2. Ngemuva kwekhefu lezinyanga ezi-4, umuthi ungaphindwa.
Ngokuqukethwe kwe-glucose okuyi-16 mmol / L, ukuzivocavoca okunzima ngeke kwenziwe. Uma izinkomba zingeqi i-10 mmol / l, ngokuhlukile, ukudlala imidlalo kuzosiza ukunciphisa ukugcwala koshukela.
Kwesinye isikhathi, ngokusweleka kwama-carbohydrate ekudleni okuqediwe, umzimba uqala ukusebenzisa izinqolobane zezicubu ze-adipose njengomthombo wamandla. Lapho ihlukana, kudedelwa izidumbu ze-ketone ezibizwa nge-acetone. Esimweni se-glucose ephezulu yegazi kanye nokuba khona kwama-ketones kumchamo, isiguli sidinga ukuphathwa okwengeziwe kwe-insulin emfushane - i-20% yedosi yansuku zonke. Uma kungekho kuthuthukiswa okuphawulwe ngemuva kwamahora ama-3, phinda umjovo.
Ama-diabetes anesifo sokushisa somzimba esiphakeme (aze afike ku-+37 о С) adinga ukwenza i-glucometry futhi athathe i-insulin. Ngokwesilinganiso, umthamo wansuku zonke ukhuphuka nge-10%. Emazingeni okushisa aze afike ku-+39 ° C, umthamo wansuku zonke ukhuphuka ngo-20-25%. Ngaphansi kwethonya lokushisa eliphakeme, i-insulin ibhujiswa ngokushesha, ngenxa yalokho, ukubonakala kwe-hyperglycemia kungenzeka. Umthamo wansuku zonke kufanele usatshalaliswe ngokulinganayo futhi uphathwe ngokuphumula kwamahora angama-3-4.
Ukwakheka kwama-antibodies ku-insulin kungaholela ekuphenduleni okuthuthukile kokusebenzisana namaprotheni. Lokhu kudala ukumelana ne-insulin. Imvamisa, ukumelana ne-hormone kubhekwa ngokufakwa kwengulube noma i-bovine insulin.
Izidakamizwa ezisebenza isikhathi esifushane azivamile ukudala imiphumela emibi. Ukungezwani komzimba ngokuvamile kwenzeka ngesimo sokulunywa kwesikhumba, ubomvu.Kwesinye isikhathi ukucasulwa endaweni yomjovo kuyaphawulwa.
Ngokusebenzisa ngokweqile noma ukusetshenziswa okungafanele kwe-insulin emfushane, i-hypoglycemic syndrome kungenzeka, ebonakala ngokuncipha okukhulu kweglucose yegazi. Izimpawu ze-hypoglycemia: isiyezi, ikhanda, indlala ebabazekayo, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, ukukhuphuka kokujuluka, ukukhathazeka nokuxineka. Ukuqeda izimpawu, udinga ukuphuza isisombululo se-glucose, ngemuva kwemizuzu engu-15-20 - thatha ingxenye equkethe inani elanele lamaprotheni nama-carbohydrate. Musa ukulala: lokhu kungadala ukuqala kwe-hypoglycemic coma.
I-insulin esebenza ngokufushane ngokushesha nangokuphumelelayo ihlela amazinga kashukela egazi. Ukwelashwa okunjalo okufaka esikhundleni kuvumela abanesifo sikashukela ukuba baphile ngamandla aphela futhi bavikele nezinkinga ezingenzeka.
I-insulin engokwemvelo neyakhiwe
I-insulin ibhekisela kuma-hormone anomjikelezo wemfundo wezigaba eziningi. Kuqala, kuma-isancancis we-pancreatic, okungukuthi kumaseli we-beta, kwakhiwa uchungechunge lwama-amino acid ayi-110, elibizwa nge-prroinsulin. Amaprotheni esignali ahlukanisiwe nalo, kuvela ama-proinsulin. Le proteni ifakwe emigodini, lapho ihlukaniswe khona nge-C-peptide ne-insulin.
Ukulandelana kwe-amino acid okusondele kakhulu kwe-insulin yengulube. Esikhundleni se-threonine kuyo, i-chain B iqukethe i-alanine. Umehluko osisekelo phakathi kwe-bovine insulin ne-insulin yabantu yizinsalela ezi-3 ze-amino acid. Ama-antibodies akhiqizwa kuma-insulin ezilwane emzimbeni, okungadala ukumelana nomuthi olungiselelwe.
Ukuhlanganiswa kokulungiswa kwe-insulin yesimanje ezimeni zelebhu kwenziwa kwenziwe kusetshenziswa ubunjiniyela bezakhi zofuzo. I-biosynthetic insulin iyafana ekwakhiweni kwe-amino acid yomuntu, ikhiqizwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-DNA esebenza kabusha. Kunezindlela ezi-2 eziphambili:
Ukuhlangana kwamagciwane aguqulwe ngofuzo.
Kusuka ku-proinsulin eyenziwe yi-bacterium modified.
I-Phenol iyisibambiso esivikela ekuvikelweni ekugomeni kwegciwane le-insulin emfushane; i-insulin ende iqukethe i-paraben.
Ukukhiqizwa kwe-hormone emzimbeni kuyaqhubeka futhi kubizwa ngokuthi ukucwaswa kwe-basal noma ngemuva. Indima yayo ukugcina amazinga evamile eglucose ngaphandle kokudla, kanye nokufakwa kweglucose engenayo evela esibindini.
Ngemuva kokudla, ama-carbohydrate angena egazini evela emathunjini njengeglucose. Ukuyidinga kudinga inani elingeziwe le-insulin. Lokhu kukhishwa kwe-insulin egazini kubizwa ngokuthi secretion yokudla (postprandial), ngenxa yokuthi, ngemuva kwamahora 1.5-2, i-glycemia ibuyela ezingeni layo lasekuqaleni, futhi ithole ushukela ungena emangqamuzaneni.
Ngohlobo 1 sikashukela, i-insulin ayikwazi ukwakhiwa ngenxa yomonakalo we-autoimmune kumaseli we-beta. Ukubonakaliswa kwesifo sikashukela kwenzeka ngesikhathi sokucekelwa phansi ngokuphelele kwezicubu ze-islet. Ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, i-insulin ifakwa ezinsukwini zokuqala zesifo kanye nokuphila.
Uhlobo lwesibili sikashukela ekuqaleni lunganxeshezelwa ngamaphilisi, ngenkambiso yesikhathi eside yesifo, i-pancreas ilahlekelwa amandla okwenza i-hormone yayo. Ezimweni ezinjalo, iziguli zifakwa nge-insulin kanye namaphilisi noma njengesidakamizwa esikhulu.
I-insulin nayo ibekelwe ukulimala, ukuhlinzwa, ukukhulelwa, izifo kanye nezinye izimo lapho amazinga kashukela engeke ancishiswe kusetshenziswa amaphilisi. Izinjongo ezitholakala ngokuqaliswa kwe-insulin:
Jwayela ushukela wegazi osheshayo, futhi uvikele ukwanda kwawo ngokweqile ngemuva kokudla ama-carbohydrate.
Yehlisa ushukela womchamo ube ubuncane.
Khipha ngaphandle i-hypoglycemia nesifo sikashukela.
Gcina isisindo somzimba esifanele.
I-Normal metabolism yamafutha.
Thuthukisa ikhwalithi yempilo yabantu abanesifo sikashukela.
Ukuvimbela izinkinga ze-vascular and neurological zesifo sikashukela.
Izinkomba ezinjalo zibonisa inkambo enesifo sikashukela esinxephezelwe kahle. Ngenxephezelo egculisayo, ukuqedwa kwezimpawu eziphambili zesifo, i-hypo- kanye ne-hyperglycemic coma, ne-ketoacidosis kuyaphawulwa.
Ngokuvamile, i-insulin evela kumanyikwe idlula ngohlelo lwe-portal vein engena esibindini, lapho ichithwa khona isigamu, bese inani elisele lisatshalaliswa emzimbeni wonke. Izici zokungeniswa kwe-insulin ngaphansi kwesikhumba zibonakaliswa eqinisweni lokuthi lingena egazini sekwephuzile, nasesibindi nakamuva. Ngakho-ke, ushukela wegazi uphakanyiswa isikhathi esithile.
Kulokhu, kusetshenziswa izinhlobo ezahlukahlukene ze-insulin: i-insulin esheshayo, noma i-insulin esebenza ngokushesha, okudingeka uyijove ngaphambi kokudla, kanye namalungiselelo we-insulin osebenza isikhathi eside (insulin ende), esetshenziswe i-1 noma amahlandla amabili ku-glycemia ezinzile phakathi kokudla.
I-insulin emfushane: ukubuyekeza kanye namagama wezidakamizwa ezihamba phambili
I-insulin yomuntu ibhekisa kuma-hormone akha ema-pancreas. Isetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. Ukuze ulingise umsebenzi ojwayelekile wama-pancreas, isiguli sifakwa nge-insulin:
ubude besikhathi besenzo.
Uhlobo lomuthi lunqunywa ngokususelwa enhlalakahleni yesiguli kanye nohlobo lwesifo.
I-insulin yenziwa okokuqala kumanyikwe ezinjeni. Ngemuva konyaka, i-hormone isivele isetshenzisiwe. Kwadlula eminye iminyaka engama-40, futhi kwenzeka ukuthi i-insulin ihlanganiswe ngamakhemikhali.
Ngemuva kwesikhathi esithile, kwenziwa imikhiqizo yokuzihlanza ephezulu. Ngemuva kweminyaka eyengeziwe embalwa, ochwepheshe baqala ukuthuthukiswa kokuhlanganiswa kwe-insulin yomuntu. Kusukela ngo-1983, i-insulin yaqala ukukhiqizwa ngezimboni zezimboni.
Eminyakeni engu-15 edlule, isifo sikashukela sasiphathwa ngemikhiqizo eyenziwe ezilwaneni. Namuhla, kuvinjelwe. Kumakhemisi, ungathola kuphela amalungiselelo wobunjiniyela bezakhi zofuzo, ukwenziwa kwalezi zimali kuncike ekufakweni komkhiqizo wezakhi zofuzo kuseli ye-microorganism.
Ngale njongo, asetshenziswa imvubelo noma uhlobo lwe-non-pathogenic lwamagciwane e-Escherichia coli. Ngenxa yalokho, ama-microorganisms aqala ukukhiqiza i-insulin kubantu.
Umehluko wawo wonke amadivaysi ezokwelapha atholakalayo namuhla yile:
ngesikhathi sokuvezwa, ama-insulin asebenza isikhathi eside, abasebenza ngokungathathi isikhathi esifushane kanye ne-insulin esebenza ngokufushane.
ngokulandelana kwe-amino acid.
Kukhona nezidakamizwa ezihlanganisiwe ezibizwa nge- "amamiksi", ziqukethe kokubili i-insulin esebenza isikhathi eside futhi esebenza ngokubambelela. Zonke izinhlobo ezi-5 ze-insulin zisetshenziselwa injongo yazo ebekiwe.
Izakhiwo ze-Pharmacokinetic ze-insulin
Ku-mellitus yesifo sikashukela, izakhiwo ze-insulin zingahluka. Isikhathi esiphakeme samazinga we-insulin we-plasma nomphumela omkhulu kakhulu wokwehlisa ushukela ungahluka ngo-50%. Ubungako bokushintshashintsha okunjalo kuya ngesilinganiso esihlukile sokutholwa komuthi kusuka ezicutshini ezingaphansi. Noma kunjalo, isikhathi se-insulin ende futhi esifushane sihluke kakhulu.
Ngokuya nge-insulin, kuyadingeka ukujova njalo i-hormone kwezicubu ezi-subcutaneous.
Lokhu kusebenza futhi kulezi ziguli ezingakwazi ukunciphisa inani le-glucose ku-plasma ngenxa yokudla nezidakamizwa ezisehlisa ushukela, kanye nakwabesifazane abanesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa, iziguli ezinesifo esenziwe ngesisekelo se-pacreatectomy. Lapha singasho ukuthi amaphilisi okunciphisa ushukela wegazi awanikezi njalo umphumela olindelekile.
Ukwelashwa kwe-insulin kuyadingeka ezifweni ezinjenge:
ngemuva kokuhlinzwa kweziguli ezinesifo sikashukela,
ngenkathi ukwelashwa kwe-insulin kusiza ukuguqula inani likashukela ku-plasma,
Ukuqedwa kwezinye izindlela ze-metabolic.
Umphumela omuhle kakhulu ungatholakala ngezindlela eziyinkimbinkimbi zokwelashwa:
Isidingo sansuku zonke se-insulin
Umuntu onempilo enhle nomzimba ojwayelekile ukhiqiza amayunithi angama-18- 40 ngosuku, noma amayunithi angama-0,2-0,5 / kg we-insulin ende. Cishe ingxenye yengxenye yale ivolumu is secretion gastric, okusele kudalulwe ngemuva kokudla.
I-hormone ikhiqizwa amayunithi angama-0.5-1 ngehora Ngemuva kokuthi ushukela ungene egazini, izinga lokukhuphuka kwe-hormone lenyuka liye kumayunithi ayi-6 ngehora.
Abantu abakhuluphele futhi abanokungamelana ne-insulin abangahlushwa isifo sikashukela banokukhiqizwa kwe-insulin izikhathi ezine ngokushesha emva kokudla. Kukhona ukuxhumana kwe-hormone eyakhiwa uhlelo lwe-portal lwesibindi, lapho ingxenye eyodwa ibhujiswa futhi ingafiki egazini.
Ezigulini zohlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela, isidingo sansuku zonke se-insulin ye-hormone sehlukile:
Ngokuyisisekelo, le nkomba iyahlukahluka kusuka kumayunithi angama-0.6 kuya kwayi-0.7 / kg.
Ngesisindo esiningi, isidingo se-insulin siyakhuphuka.
Lapho umuntu edinga amayunithi / kg angama-0,5 kuphela ngosuku, ukhiqizwa ngokwanele ama-hormone noma isimo somzimba esihle.
Isidingo se-hormone ye-insulin zezinhlobo ezi-2:
Cishe ingxenye yesidingo sansuku zonke ingefomu le-basal. Le hormone ibandakanyeka ekunqandeni ukuqhekeka kashukela esibindini.
Ngefomu le-post-prandial, isidingo sansuku zonke sinikezwa ngemijovo ngaphambi kokudla. I-hormone ibandakanyeka ekufakweni kwezakhi zomsoco.
Ngemuva kwalokho irejimeni yokwelashwa isetshenziswa iyinkimbinkimbi ngokwedlulele, lapho i-insulin esebenza isikhathi esijana ne-insulin esebenza kambalwa noma i-insulin esebenza ngokufushane ngokubambisana okufushane isetshenziswa ngokuhlanganiswa.
Imvamisa isiguli selashwa ngokuya ngerejimeni yokuxubha ehlanganisiwe, lapho iphatha umjovo owodwa ngesikhathi sokudla kwasekuseni, kanti esisodwa ngesikhathi sokudla kwakusihlwa. I-hormone kuleli cala iqukethe i-insulin yesikhathi esifushane nesikhathi esiphakathi.
Lapho uthola umthamo wakusihlwa we-hormone NPH noma i-insulin, itheyiphu ayinikezi isilinganiso esidingekayo se-glycemia ebusuku, khona-ke umjovo uhlukaniswe izingxenye ezimbili: ngaphambi kokudla kwakusihlwa, isiguli sifakwa ngomjovo we-insulin osekufushane, futhi ngaphambi kokulala sifakwa i-insulin NPH noma i-insulin tape.
Inani le-insulin linqunywa ngawodwana, ngokususelwa kuzinga likashukela egazini. Ngokuqala kwama-glucometer, manje sekulula ukukala izinga le-hemoglobin ye-glycosylated ku-plasma, futhi kuye kwaba lula ukubona ubukhulu be-hormone, okuncike kulezo zinto:
izindawo nokujula komjovo,
umsebenzi wezicubu endaweni yokulimala,
I-insulin esebenza ngokufushane: amagama, yiziphi izidakamizwa ze-insulin nemithi ezingcono?
Ukwethulwa kwe-insulin njengekhambi lokuphindisela lesifo sikashukela namuhla kuyindlela kuphela yokulawula i-hyperglycemia kusifo sohlobo 1, kanye nasesimweni sikashukela sohlobo lwe-insulin 2.
Ukwelashwa kwe-insulin kwenziwa ngendlela yokuthi kungandiswa ukuletha isigqi sehomoni emzimbeni wegazi.
Ngakho-ke, kusetshenziswa izidakamizwa zezinsuku ezahlukahlukene zokufakwa emzimbeni wezicubu ezi-subcutaneous. Ama-insulin amade alingisa ukukhishwa kwe-hormone okuyisisekelo, okungahambisani nokufakwa kokudla emathunjini, futhi ama-insulin amafushane nama-ultrashort asiza ukwehlisa i-glycemia ngemuva kokudla.
Ngabe isebenza kanjani i-insulin?
Ukulungiswa kwe-insulin, njengama-hormone emvelo, kubopha kuma-receptors kulwelwesi lweseli bese kungena kuwo. Esitokisini, ngaphansi kwethonya le-hormonal, ukusabela kwamakhemikhali kuyabangelwa. Ama-receptor anjalo atholakala kuzo zonke izicubu, futhi kunezikhathi zezikhathi ezingaphezulu kumaseli okuhlosiwe. Ukuze uncike kuma-insulin kufaka phakathi amaseli wesibindi, ama-adipose nezicubu zomzimba.
I-insulin nemithi yayo ilawula cishe zonke izixhumanisi ze-metabolic, kepha umphumela ushukela wegazi uyinto ephambili.I-hormone ihlinzeka ngokunyakaza kwe-glucose ngokusebenzisa ulwelwesi lweseli futhi ikhuthaza ukusetshenziswa kwayo ngendlela ebaluleke kakhulu yokuthola amandla - glycolysis. IGlycogen yakhiwa kusuka kushukela kusibindi, kanti nokuqanjwa kwamangqamuzana amasha nakho kuncishisiwe.
Le miphumela ye-insulin ibonakaliswa eqinisweni lokuthi izinga le-glycemia liba phansi. Ukulawulwa kokuhlanganiswa kwe-insulin kanye nokugcinwa kokunye kusekelwa ukugxilwa kwe-glucose - kukhuphuka izinga le-glucose, futhi eliphansi livimbele ukufihla. Ngaphezu kwe-glucose, ukwakheka kuthinteka kokuqukethwe kwama-hormone egazini (i-glucagon ne-somatostatin), i-calcium nama-amino acid.
Umphumela we-metabolic we-insulin, kanye nezidakamizwa ngokuqukethwe kwawo, uboniswa ngale ndlela:
Ivimbela ukwephulwa kwamafutha.
Inqanda ukwakheka kwemizimba ye-ketone.
Ama-acid amancane angena egazini (akhulisa ubungozi be-atherosulinosis).
Emzimbeni, ukuwohloka kwamaprotheni kuvinjelwe futhi ukuvela kwawo kusheshisiwe.
I-insorption kanye nokusatshalaliswa kwe-insulin emzimbeni
Amalungiselelo e-insulin afakwa emzimbeni. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa amasirinji abizwa ngokuthi ama-insulin, amapeni wesirinji, iphampu ye-insulin. Ungafaka izidakamizwa ngaphansi kwesikhumba, ungene emqubeni futhi ungene emthanjeni. Ukulawulwa kwe-intravenous (uma kwenzeka kuthola ukoma), ama-insulin (ama-ICD) amafushane kuphela, futhi indlela esetshenziswayo engenacala ivame ukusetshenziswa.
I-pharmacokinetics ye-insulin incike kusayithi lomjovo, umthamo, ukuhlangana kwento esebenzayo nomuthi. Futhi, ukuphuma kwegazi endaweni yomjovo, ukusebenza kwemisipha kungathinta isilinganiso sokungena egazini. Ukufakwa ngokushesha kuhlinzekwa ngomjovo odongeni olungaphandle lwangaphakathi lwesibeletho; umuthi ofakwe kufakwa enkingeni noma ngaphansi kwgxombe lehlombe umunca kakhulu.
Egazini, i-04-20% ye-insulin iboshelwa ama-globulins, ukubonakala kwama-antibodies kumuthi kungadala ukusabela okuthuthukile kokusebenzisana namaphrotheni, futhi, ngenxa yalokho, ukumelana ne-insulin. Ukumelana ne-hormone kungenzeka uma kungabekwa ingulube noma i-insulin ye-bovine.
Iphrofayili yomuthi ayikwazi ukufana ezigulini ezahlukahlukene, ngisho nakumuntu oyedwa kuncike ekushintshashintsheni.
Ngakho-ke, lapho kunikezwa idatha yesikhathi sokusebenza nokuqedwa kwesigamu sempilo, ama-pharmacokinetics abalwa ngokusho kwezinkomba ezimaphakathi.
Ama-insulin ezilwane, okubandakanya ingulube, i-bovine, i-bovine, i-insulin, bekungasetshenziswa kakhulu ukuthola izidakamizwa zokwenziwa - ama-analogues we-insulin yomuntu. Ngezindlela eziningi, eyinhloko i-allergenicity, i-insulin enhle kakhulu idalwe ngofuzo.
Isikhathi sokusebenza kwamalungiselelo we-insulin sehlukaniswe ngama-ultrashort nama-insulin amafushane. Zikhiqiza kabusha ukucashunwa kwama-hormone okuvuselelwa ukudla. Imithi yesikhathi esiphakathi, kanye nemisipha emide ukulingisa ukucashelwa kwe-hormone okuyisisekelo. I-insulin emfushane ingahlanganiswa ne-insulin ende kumalungiselelo wokuhlanganiswa.
Yikuphi i-insulin enhle kakhulu - okufishane, okuphakathi noma okude, kunqunywa ngohlobo lomuntu ngamunye wokulashwa kwe-insulin, okuncike eminyakeni yobudala besiguli, izinga le-hyperglycemia kanye nokuba khona kwezifo ezihambisanayo kanye nezinkinga zikashukela.
Iqembu lama-insulin e-ultrashort libonakaliswa ukuqala kokuqala kokusebenza - ngemuva kwemizuzu eyi-10-20, ushukela wehla ngokusemandleni ngemuva kwamahora we-1-2,5, ubude besikhathi somphumela we-hypoglycemic amahora angama-3-5. Amagama izidakamizwa: Humalog, NovoRapid kanye Apidra.
I-insulin emfushane isebenza ngemuva kwemizuzu engama-30-60, umphumela wayo uhlala amahora angama-6-8, kanti okuphezulu kuyabonakala amahora angama-2-3 ngemuva kokuphatha. Kuyadingeka ukujova ukulungiswa kwe-insulin okufushane okwemizuzu engama-20-30 ngaphambi kokudla, ngoba lokhu kuzonikeza inani eliphakeme le-hormone esegazini esikhathini lapho ushukela ufinyelela inani lawo eliphakeme kakhulu.
I-insulin efushane iyatholakala ngaphansi kwamagama omkhiqizo alandelayo:
I-Actrapid NM, i-Rinsulin R, i-Humulin Regular (ukulungiswa kofuzo lwe-genulin)
I-Khumudar R, i-Biogulin R (i-insulin eyenziwe nge-insulin).
I-Actrapid MS, iMonosuinsulin MK (ingulule ingulube).
Yikuphi i-insulin okungcono ukuyikhetha kulolu hlu kunqunywa ngudokotela ohamba phambili ebheka ukuthambekela kokungezwani komzimba, ukuqokwa kwezinye izidakamizwa. Uma usebenzisa ama-insulin we-durations ahlukene ndawonye, ​​kungcono uma ukhetha umakhi owodwa. Intengo yemikhiqizo ehlukahlukene ye-insulin inqunywa ngumenzi.
I-insulin esebenza ngokushesha iboniswa ukuphathwa kwansuku zonke ngaphambi kokudla main, kanye nokwelashwa kwe-coma sikashukela ngesikhathi sokungenelela kokuhlinzwa. Kwimithamo emincane, lo muthi usetshenziselwa abasubathi ukwakha izicubu zomzimba, ngokuphelelwa ngamandla, i-thyrotooticosis, i-cirrhosis.
Imithi yesikhathi esiphakathi nendawo kanye nesenzo eside isetshenziselwa ukugcina i-standardoglycemia lapho i-insulin emfushane noma ye-ultrashort ingasebenzi.
Imiyalo yokusebenzisa iqukethe imiyalo ethile ebangeni lokuphathwa kwezidakamizwa ezinjalo, imvamisa kudingeka ukuthi ihlaselwe izikhathi ezi-1 noma ezi-2 ngosuku, kuye ngezinga le-glycemia.
Ukubalwa kwamthamo we-insulin
Ukukhetha okuyikho kokwelashwa kuvumela iziguli ezinesifo sikashukela i- mellitus ukuthi zingayeki ukudla eziyithandayo, ngaphandle kwemikhiqizo equkethe ushukela nofulawa omhlophe. Ukunambitheka okumnandi kungatholwa kuphela esikhundleni soshukela.
Ukuze uqonde ukuthi ungabale kanjani umthamo, okuyi-insulin engcono, ungayisebenzisa kanjani kahle i-insulin, umthamo uyachithwa ucubungula okuqukethwe amayunithi wesinkwa ajwayelekile (i-XE). Iyunithi elilodwa lithathwa lilingana ne-10 g yama-carbohydrate. Amayunithi esinkwa, abalwa ngokuya ngamatafula ohlobo oluthile lomkhiqizo, anqume ukuthi yiluphi uhlobo lwe-insulin okufanele luphathwe ngaphambi kokudla.
Cishe i-1 IU ye-insulin ikhishwa nge-XE ngayinye. Umthamo ukhuphuka ngokumelana komuntu ngamunye nomuthi, kanye nokuphathwa kanyekanye kwama-hormone e-steroid, izindlela zokuvimbela inzalo, iHeparin, antidepressants kanye nezinye izindlela zokuhlwaya umzimba.
Umphumela we-hypoglycemic we-insulin uthuthukiswa izidakamizwa ezinciphisa ushukela kumathebulethi, ama-salicylates, ama-anabolic steroid, ama-androgens, i-furazolidone, i-sulfonamides, i-theophylline, izidakamizwa ezine-lithium, i-calcium.
I-Ethanol ivimbela ukwakheka kwe-glucose esibindini. Kulokhu, ukusetshenziswa kophuzo oludakayo ngemuva kolwelwesi lwe-insulin kuholela esimweni esinamandla se-hypoglycemic. Kuyingozi kakhulu ukuphuza utshwala esiswini esingenalutho.
Izincomo zokunquma umthamo omaphakathi we-insulin:
Ukubalwa kwenziwa nge-1 kg yesisindo. Ngobuningi obwedlulele, ukuqina kuncipha ngo-0,1, ngokuntula - ngokwanda okungu-0,1.
Ezigulini ezinesifo sohlobo lwe-1 mellitus esisanda kutholwa, amayunithi angama-0.4-0,5 nge-1 kg.
Ngohlobo 1 sikashukela, ngesinxephezelo esingaguquki noma ukubola, umthamo unyuswa waba ngu-0.7-0.8 U / kg.
Umthamo we-insulin uvame ukwanda kwabasakhulayo ngenxa yokuqunjelwa ngokweqile kwe-hormone yokukhula nama-hormone ocansi egazini. Ngesikhathi sokukhulelwa ku-semester yesithathu, ngenxa yethonya lamahhala e-placental kanye nokuthuthukiswa kokumelana ne-insulin, umthamo womuthi uvuselelwa phezulu.
Ezigulini ezinqunywe i-insulin, imfuneko yokulungiswa komuthi, kucatshangelwa ukuqapha ushukela wegazi njalo. Uma izinga le-glycemia ngemuva kokudla lidlula okwejwayelekile, khona-ke ngosuku olulandelayo umthamo we-insulin ukhuphuka iyunithi elilodwa.
Kunconywa kanye ngesonto ukudweba igrafu yezinguquko kushukela wegazi, ukukala ngaphambi nangemuva kokudla okuyinhloko, naphambi kokulala. Imininingwane eku-glycemia yansuku zonke, inani lamayunithi esinkwa asetshenzisiwe, umthamo we-insulin inj injele uzosiza ukulungisa kahle irejimeni yokwelapha ye-insulin ukugcina impilo yesiguli enesifo sikashukela.
I-insulin emfushane ne-ultrashort ichazwa kuvidiyo kule ngxenye.
I-insulin esebenza ngokushesha
Lolu hlobo lwento lubizwa ngegama ngoba luqala ukusebenza kungakapheli imizuzu eyishumi nanhlanu ngemuva kokufakwa kwalo, kepha ngasikhathi sinye luyakhishwa ngokushesha okukhulu emzimbeni, luyayeka isenzo salo ngemuva kwamahora amane.
Lokhu kufakwa kunenzuzo ngoba akudingi ukulinda ihora ngaphambi kokudla, kuthakwa ngokushesha okukhulu futhi kungadliwa kungakapheli imizuzu emihlanu kuya kweyishumi ngemuva komjovo, futhi kunenketho yokusebenzisa umuthi hhayi ngaphambili, kodwa ngemuva kokudla.
I-Ultrashort insulin ibhekwa njengeyinamandla kakhulu phakathi kwazo zonke izidakamizwa ezisuselwa kule hormone, umphumela wayo emzimbeni unamandla okuphindwe kabili kunaleyo yezidakamizwa ezifushane nezinde. Imvamisa isetshenziswa lapho kukhona ama-spikes abukhali ushukela wegazi, ngoba lokhu kungaholela ezinkingeni ezinzima futhi kufe uhlangothi.
Umuthi onjalo ubaluleke kakhulu ezimweni eziphuthumayo, ngokwesibonelo, lapho kungenakwenzeka ukubala isikhathi sokudla, ukumuncwa okusheshayo kwento kukuvumela ukuthi ungakhathazeki nge-coma engenzeka ye-hyperglycemic.
Kepha kubalulekile ukukwazi ukubala umthamo owuthandayo, ngoba iyunithi elilodwa lomuthi eluselwa kwinto ye-ultrashort linganciphisa ukuhlangana koshukela izikhathi ezimbili kuya kwezimbili nesigamu, kanti i-overdose izonyusa amathuba okuthi kwenzeke enye i-coma - hypoglycemic.
Inani lomuthi wokujova akufanele libe ngaphezulu kwe-0,04 yomthamo we-insulin emfushane.
Izinhlobo eziphambili ze-insulin ye-ultrashort zifaka amagama alandelayo:
Izici zokuqhathanisa ze-insulin ezimfushane nezinto ezisebenza isikhathi eside zivezwa kulelithebula elilandelayo:
Isikhashana se-insulin I-insulin ende
Ukwethulwa kwento kuthanda esiswini, ngoba lokhu kuqinisekisa ukumuncwa ngokushesha. Ngokutholwa kancane, imijovo yenziwa ethangeni.
Ihanjiswa isikhashana ngaphambi kokudla (kuya ngohlobo lwe-insulin esebenza ngokushesha), imvamisa ngemizuzu eyishumi nanhlanu noma isigamu sehora. Kuyadingeka ukwenza imijovo cishe ngasikhathi sinye ekuseni nakusihlwa, umjovo wasekuseni wenziwa kanye nge-insulin emfushane.
I-insulin elula kufanele inikezwe kuphela ngaphambi kokudla, akunakwenzeka ukwenqaba ukudla, ngoba lokhu kusongela ikhehla le-hypoglycemic. Lolu hlobo lwesidakamizwa aluhlangene nokudla, lilingisa ukukhishwa kwe-insulin hhayi ngaphambi kokudla, kepha usuku lonke.
Izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside zifaka izinhlobo ze-insulin njenge:
Imithi yesikhathi sobude bokuvezwa, ngokwesibonelo, i-NPH neTape,
Izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside njenge-Detemir ne-Glargin.
Naphezu komgomo wayo oyinhloko, okuwukulinganisa ukugcinwa kwe-basal secretion, imishanguzo ehlala isikhathi eside ibanjwa ngesivinini esihlukile usuku lonke esigulini esifanayo. Kungakho ukuqapha njalo amazinga kashukela kudingekile, okungathi noma kusetshenziswa imishanguzo esekela i-insulin ingagxuma kakhulu.
Inzuzo enkulu yezidakamizwa ezinjalo ukuthi ukusebenza kwazo kwenzeka ngokushesha, kungakapheli isigamu sehora ngemuva komjovo, futhi kuthatha amahora ayishumi nane kuya neshumi nesithupha.
Njengoba umehluko womphumela emzimbeni uncike ekulinganiseni kwama-hormone afakiwe ekwelashweni, awukwazi ukuqala isikhathi esizimele ngaphandle kokubonana nodokotela ophoqelekile ukubala umthamo bese ukhetha umuthi, ngokubheka izici zomzimba wesiguli, uhlobo lwesifo sikashukela, nokunye.
Ummeleli oyinhloko wemithi exubile yi-Novomix 30, engasetshenziswa ngisho nangabesifazane abakhulelwe.
Imithetho yokuphuza i-insulin
Ekuqaleni kokwelashwa kwe-insulin, udokotela kufanele abale isilinganiso esifanele somuthi nsuku zonke, ngokususelwa eminyakeni yobudala, isisindo, uhlobo lwesifo sikashukela nezimpawu zomuntu ngamunye.
Inani elibalwe ngosuku kumele lihlukaniswe izingxenye ezintathu noma ezine, okuzoba ngumthamo wesikhathi esisodwa.
Ukuqapha njalo kwamazinga kashukela kukuvumela ukubala ngokunembile inani lesithako esisebenzayo esidingekayo.
Namuhla, amapeni wesirinji athandwa kakhulu, anenalithi elincanyana kakhulu futhi angathwalwa ngokuphepha ephaketheni lakho, enza umjovo ngaso sonke isikhathi lapho udinga. Ngaphambi komjovo, udinga ukucubuza indawo yesikhumba kahle, ungenzi umjovo olandelayo endaweni efanayo, kungcono ukushintshana.
Uhlobo lwemithi ejwayelekile
Ekuseni - i-hormone yokuchayeka okufushane nokwesikhathi eside ndawonye,
Usuku ukuvezwa okufushane
Kusihlwa ukuvezwa okufushane
Ubusuku yihomoni yesenzo eside.
Izidakamizwa ezenziwa ngama-pancreatic hormone zinomphumela obaluliwe we-anabolic, ngakho-ke asetshenziswa ngenkuthalo ekwakheni umzimba. Ngenxa ye-insulin, umetabolism uyathuthuka, ungqimba lwamafutha lushiswa ngokushesha, futhi isisindo semisipha sikhula ngenkuthalo. Umphumela we-anticatabolic yento ikuvumela ukuthi ulondoloze izicubu ezikhule kakhulu, ungazivumeli ukuthi zinciphe.
Naphezu kwazo zonke izinzuzo zokusebenzisa i-insulin ekwakheni umzimba, kukhona ubungozi bokuthola i-hypoglycemic coma, okuthi, ngaphandle kosizo lokuqala olufanele, iholele ekufeni.
Kukholelwa ukuthi imithamo engaphezulu kwe-100 PIECES isivele ibhekwa njengeyabulala, futhi yize abanye bebelokhu bephilile ngisho nangemva kwamayunithi angama-3000, akufanele ubeke impilo yakho engcupheni ngenxa yemisipha emihle futhi ebaziwe.
I-coma ayenzeki ngokushesha, umuntu unesikhathi sokwandisa ukungenisa ushukela emzimbeni, ngakho-ke imiphumela ebulalayo ayivelakancane, kodwa lokhu akubonisi ithuba lawo.
Inkambo yokuphatha iyinkimbinkimbi kunalokho, ayinakusetshenziswa izinyanga ezingaphezu kwezimbili, ngoba kulokhu kungenzeka ukwephulwa komkhiqizo wama-hormone uqobo.
Imijovo yokuqala iqala ngamayunithi amabili, bese leli nani landa kancane kancane ngamanye amabili. Uma ukusabela kuyinto evamile, ungaletha umthamo kumayunithi ayi-15.
Indlela emnene yokuphatha injengo inani elincane lezinto njalo ngosuku. Akunakusho ukuthi kufanele ufake umuthi ngaphambi kokuqeqeshwa naphambi kokulala.
I-insulin yinto edlala indima ebaluleke kakhulu emzimbeni, yingakho ukubhekisisa izinguquko ekusekelweni kwayo kuzosiza ukugcina impilo enhle nenempilo. Izinhlobo ezahlukahlukene zehormon zikuvumela ukuthi uzikhethele noma yisiphi isiguli, simvumela ukuba aphile impilo egcwele futhi ungesabi ukuqala kwesibindi.
I-insulin esebenza ngokufushane: uhlu lwezidakamizwa, amagama namatafula
I-insulin esebenza ngokushesha iyisidakamizwa esikuvumela ukuthi umise ngokushesha iziqongo zokudla ushukela.
Kuyaziwa ukuthi umuntu onesifo sikashukela uyaphoqelelwa kukho konke impilo yakhe ukuba alondoloze izinga loshukela emzimbeni ngemijovo ye-insulin.
Ama-insulin asebenza ngokufushane angasetjenziswa zombili ekunakekelweni okuphuthumayo kwesiguli esinjalo, nokwelashwa kokulungiswa kwansuku zonke.
Ama-insulin amafushane, lapho engeniswa emzimbeni, afinyelela amandla awo omthelela omkhulu ngemuva kwamahora we-1.5-2. Futhi bahlala egazini isikhathi esingamahora ayisithupha, bese behlukana. I-insulin emfushane ihlukaniswa ngesakhiwo sayo - akukho lutho ekwakhiweni kwayo ngaphandle kwehomoni ngokwayo, kuyilapho ku-insulin ejwayelekile kunezengezo ezimbalwa.
Iqala ukusebenza imizuzu engama-30 ngemuva kokungena kwegazi. Ngakho-ke, kufanele kuthathwe uhhafu wehora ngaphambi kokudla. Kunezidakamizwa ezengeziwe ezinezinyathelo ezisheshayo, ziqala ukusebenza kungakapheli imizuzu eyi-15 ngemuva kokungena egazini. Izidakamizwa ezinjalo zibizwa ngokuthi ama-insrain ama-ultra -nene.
Kukhona uhla lwezidakamizwa olunamagama angavezi ukusebenza kwalo, kodwa-ke, encazelweni yalomjovo we-insulin, kukhona inkomba yesikhathi esiqondile sokwenza kwabo.
Ukuze kube lula ukufunda uhlu, kwetafula elilandelayo:
"I-Humalog", "i-Novorapid", "i-Apidr" - izidakamizwa ziyi-ultrashort, isikhathi sazo singamahora ama-3-4.Baqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu engu-5-15 ngemuva kokuphatha, bafinyelele inani eliphakeme ngemuva kwamahora ama-2.
"I-Actrapid NM", "Humulin R", "Insuman" - imishanguzo imfushane, isikhathi sayo singamahora angama-6-8. Baqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu engama-30 ngemuva kokufakwa emzimbeni, bafinyelele inani labo eliphakeme ngemuva kwamahora ama-3-4.
I- "Protafan NM", "Humulin NPH", "Bazal" - ibhekisele kuma-insulin asebenza phakathi nendawo. Isikhathi sabo singamahora ayi-12-16. Baqala ukusebenza emahoreni angama-1-1,5 emva kokwethulwa emzimbeni, bafinyelele inani labo emahoreni ayi-6 ukuya kwayi-10.
"I-Lantus", "Levemir" - izidakamizwa zingezabaphethi abasebenza isikhathi eside. Isikhathi sabo singamahora angama-24-30. Qala ukusebenza ngemuva kwamahora angama-1 -2. Inani eliphakeme lesenzo alivezwanga.
Onke amagama omkhiqizo abonisiwe aqinisekisiwe, futhi ahloliwe. Imithi engaziwa futhi engaqinisekisiwe akufanele isetshenziswe.
Kuyacaca ukuthi i-insulin isidakamizwa esivumela abantu abanesifo sikashukela ukuba khona ngokwejwayelekile. Kepha yimiphi imigomo ethile etholakala, ngokwethulwa kwayo? Injongo enkulu ukuguqula ushukela egazini, ikakhulukazi ngemuva kokudla ama-carbohydrate.
Omunye umgomo ukususa ubungozi be-hypoglycemia kanye nesifo sikashukela. Umuntu othatha i-insulin uvimbela ukukhula kwesisindo somzimba, okubuye kube ngumsebenzi onzima kulo muthi.
I-insulin egazini, ivimbela ukuthuthukiswa kwezifo zemithambo yegazi, ukucekelwa phansi kwezindonga zazo, futhi ngenxa yalokho, ukubukeka kwe-gangrene. Ekugcineni, ukuthatha i-insulin umuntu kuthuthukisa kakhulu izinga lempilo yabo.
Isimo kuphela salokhu ukulandela imithetho yokuphuza izidakamizwa.
I-insulin iyi-hormone eyinkimbinkimbi kakhulu eyakhiwa inani elikhulu lama-amino acid. Ukwakheka kwayo kwenzeka ngezigaba eziningana. Esigabeni sokuqala, ama-amino acid akha i-preproinsulin. Ngemuva kokuhlukaniswa kweprotheni yesiginali kuyo, kwakhiwa i-proinsulin. Le proteni ijika ibe yimiganu, ngaphakathi lapho into ihlukaniswa khona ibe yi-C-peptide ne-insulin.
Lokhu kulandelana kucishe kuphindwe ngokuphelele ezilwaneni. Ngokufanele ezingulubeni nasezinkomeni. Umehluko kuphela ovela ku-homon womuntu ukuthi hhayi i-threonine kepha i-alanine isetshenziswa kumaketanga we-amino acid. Okubi nge-insulin yezilwane ukuthi amasosha omzimba angakheka emzimbeni womuntu.
Kulokhu, umuntu ushintshela esikhundleni sokwenziwa. Ikhiqizwa ngobuchwepheshe be-DNA obuhlanganisa. Kulokhu, kusetshenziswa indlela yokuhlanganiswa kwamagciwane aguqulwe ngofuzo. I-insulin emfushane ene-phenol ne-insulin ejwayelekile enama-paraben igcinwe ukuvikela i-antimicrobial.
I-insulin emfushane ingenziwa ngezinto ezenziwe ngesilwane, imvamisa izingulube, noma zenziwe synthetically. Yisiphi esilungele isiguli ngasinye, udokotela unquma. Lokhu kukhishwa yiqiniso lokuthi isilinganiso se-metabolic sehlukile kuwo wonke umuntu, kanjalo nesisindo, iminyaka, nezinye izinto eziningi.
Noma kusuka enanini lokudla okudliwayo. Umthamo olawulwa we-insulin omfushane ungahle uxhomeke. Omunye umthetho obalulekile ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezikhethekile ze-insulin. Ngosizo lwabo kuphela okungenzeka ukukala kahle umthamo odingekayo womuthi.
Umthetho wesithathu - isikhathi sokuthatha umuthi kufanele ube ngokufanayo. Umzimba kumele ujwayele ohlelweni lokuphatha, khona-ke ukusebenza kwawo kuzokhula kakhulu.
Umthetho wesine uthi umjovo ngamunye we-insulin ngamunye kufanele wenziwe endaweni ehlukile. Akunakwenzeka ukugwaza endaweni efanayo zonke izinsuku, kungaqhamuka ithumba.
Ngasikhathi sinye, awukwazi ukugcobhoza isayithi lomjovo, ngoba umuthi kufanele ungeniswe egazini kahle.
Futhi umthetho wokugcina - naphezu kokusebenza kwe-insulin esheshayo, awukwazi ukuthathwa ngokuqhubekayo, futhi ngisho nangaphezulu, ubuyiselele izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside.
Lokhu kungenxa yokuthi isenzo se-insulin esheshayo yi-spasmodic, futhi akunakwenzeka ukubala ngokunembile umthamo wokulawula okwalandela.
Uma kuhlukunyezwa futhi kuthathwa njalo, khona-ke kungekudala kungaba nemiphumela eyingozi - ukukhohlakala kwesifo sikashukela.
Uma i-insulin efushane ingasetshenziswanga kahle, kungavela izimpawu zokweqisa. Zonke zibangelwa ukwehla okukhulu ushukela wegazi, okusho ukulinganisela okuphazamisekile kumetabolism. Umphumela onjalo emzimbeni unezimpawu ezithile:
Isiyezi kuze kube yilapho kulahlekelwe ngokuphelele ukuma esikhaleni nokwenza mnyama emehlweni lapho uzama ukushintsha isikhundla somzimba esikhaleni.
Kumuntu onokweqisa kwe-insulin, kunomuzwa ongenakuphikwa wendlala.
Imvamisa kuba nekhanda elibuhlungu.
Ukushaya kwenhliziyo kuba njalo, kuze kube yi-tachycardia kanye ne-atric fibrillation ye-ventricles.
I-psyche yomuntu ngaphansi kwethonya lokushintsha kwe-insulin, ifaka ukukhathazeka, iphenduke ukwethuka. Kungabuye kungacasuki futhi kube kubi ngokungenangqondo.
Ukuze usize umuntu onezimpawu ze-overdose, kumele kuthathwe izinyathelo eziningana:
Okokuqala, kuyadingeka ukubiza i-ambulensi noma ukuletha umuntu ophethe ngokweqile esibhedlela esiseduze.
Okwesibili, ohlukunyeziwe kumele anikezwe okuthile akudlayo okuqukethe amaprotheni nama-carbohydrate.
Okwesithathu, awunakuvumela umuntu ukuba awe. Ngempela, omunye wemiphumela ye-insulin ubuthongo obukhulu. Uma uvumela umuntu one-overdose ukuba alale noma aphelelwe amandla, khona-ke angawela enkingeni yesifo sikashukela. Kumele kuqondwe ukuthi isimo sabo ngaso sonke isikhathi asikwazi ukukhipha isiguli.
Ukusetshenziswa kwe-insulin emfushane kwezemidlalo
I-insulin emfushane ithole ukusetshenziswa kwayo hhayi kuphela ekulweni nesifo sikashukela, kodwa nakwezemidlalo. Okungukuthi, ekwakheni umzimba. Lo mdlalo uqukethe ukwakhiwa okusheshayo kwemisipha, futhi i-insulin ingumsizi osemqoka kulokhu. Idonsa ama-molecule eglucose futhi iwadlulisele kwiseli ngayinye yemisipha, ngaleyo ndlela ikhulisa ukukhula kwayo.
Isimo esidingekayo sokwakha izicubu zemisipha nge-insulin umthwalo ongapheli emisipha. Okusho ukuthi, umsubathi kufanele anikeze konke okuhle ngokuqeqeshwa ngo-100%, ngaphandle kwalokho umzimba ngeke ube nezidingo zokwakha izicubu zomzimba.
Futhi, umsubathi kumele adle kahle futhi alinganise. Awungeke ukwenze ngaphandle kosizo lwezobuchwepheshe olondlayo.
Ukubala ukudla, uchwepheshe ubheka isisindo somsubathi, isikhathi sokuqeqeshwa kwakhe, kanye nemiphumela yokuhlolwa kwegazi nomchamo ngoshukela kanye nama-hormone amaningi.
Ukubuka konke kwezinhlobo ezinhle kakhulu ze-insulin ezisebenza isikhathi eside netafula
Ama-insulin asebenza isikhathi eside ayakwazi ukugcina amazinga e-glucose ajwayelekile usuku lonke kunoma yiliphi izinga lesifo sikashukela. Kulokhu, ukwehla kokuqoqwa kashukela ku-plasma kwenzeka ngenxa yokufakwa kwayo ngokuqinile yizicubu zomzimba, ikakhulukazi isibindi nemisipha. Igama elithi "insulin" isikhathi eside likwenza kucace ukuthi isikhathi semiphumela yemijovo enjalo, uma siqhathaniswa nezinye izinhlobo zemithi enciphisa ushukela, sisinde.
I-insulin esebenza isikhathi eside ikhishwa ngendlela yesisombululo noma yokumiswa kokuphathwa kwe-intravenous and intramuscular.Kumuntu ophile kahle, le hormone ikhiqizwa ngokuqhubekayo ngamanyikwe. Kwakheka ukwakheka kwesikhathi eside kwama-hormone ukulingisa inqubo efanayo kubantu abanesifo sikashukela. Kepha imijovo enwetshiwe iyaphikiswa ezigulini ezisesimweni sikashukela noma esimweni esihle.
Njengamanje, imikhiqizo yesikhathi eside neyesikhathi eside ibonakala:
Isebenza ngemuva kwemizuzu engama-60, umphumela omkhulu utholakala ngemuva kwamahora angama-2-8. Ilawula izinga le-glucose egazini amahora angama-18-20.
Uhlobo lokunwetshwa kokumiswa kokuphathwa kwe-sc. Kuthengiswa emabhodleleni we-4-10 ml noma kuma-cartridge we-1.5-3.0 ml ngamapeni wesirinji.
Iqala ukusebenza kungakapheli amahora angama-1-1.5. Ukusebenza kahle kakhulu kuboniswa ngemuva kwamahora angama-4 kuya kwe-12 futhi kuthatha amahora okungenani angama-24.
Ukumiswa kokwethulwa kwe-s / c. Ipakishwe kuma-cartridge we-3 ml, ama-5 ama-PC kwephakethe.
Isebenza ngemuva kwamahora ayi-1-1.5. Isebenza ngempumelelo amahora angama-11- 24, umphumela omkhulu wenzeka esikhathini samahora angama-4- 12.
I-insulin enwetshiwe yokulawulwa kwe-sc. Kutholakala kuma-cartelge ama-3 ml, emabhodleleni ayi-5 ml nakumabhokisi ama-cartridge ama-3 ml wezipeni zesirinji.
I-insulin yesikhathi eside icushiwe kungakapheli amahora angu-1.5. Inani eliphakeme lomsebenzi livela phakathi kwamahora angama-3 ukuya ku-10. Isikhathi esimaphakathi sokwenza kosuku usuku.
Kusho s / ukufaka isicelo. Kuyabonakala kumabhokisi wezinhlamvu zesirinji ka-3 ml, emabhodleleni ka-10 ml.
Iqala ukusebenza imizuzu engama-60 ngemuva komjovo, ilawula ukugcwala koshukela egazini okungenani usuku.
Ama-Cartridges ajwayelekile futhi ngamapeni wesirinji ama-3 ml, ku-10 ml ama-vials wokuphathwa kwe-sc.
Inani eliphakeme lomsebenzi lenzeka ngemuva kwamahora angama-3-4. Isikhathi somphumela womenzeli isikhathi eside singamahora angama-24.
I-insulin yesikhathi eside itholakala kumapena wesirinji ama-3 ml.
Igama lomuthi we-hypoglycemic nokuthi ungayisebenzisa kanjani i-insulin esebenza isikhathi eside unganconywa kuphela ngudokotela oya kuye.
Ngaphezu kwalokho, abantu abanesifo sikashukela akufanele bazimele esikhundleni se-ejenti yesikhathi eside nge-analogue yayo. Umuthi we-hormone onwetshiwe kufanele unqunywe ngokubonakalayo ngokubuka kwezokwelashwa, futhi ukwelashwa nakho kufanele kwenziwe kuphela ngaphansi kokubhekwa ngudokotela okuqinile.
I-insulin esebenza isikhathi eside, kuye ngohlobo lwesifo sikashukela, ingahlanganiswa ne-ejenti esebenza ngokushesha, eyenziwa ukuze kufezwe umsebenzi wayo oyisisekelo, noma isetshenziswe njengomuthi owodwa. Isibonelo, ngendlela yokuqala yesifo sikashukela, i-insulin yesikhathi eside ivame ukuhlanganiswa nomuthi omfishane noma we-ultrashort. Ngendlela yesibili yesifo sikashukela, imithi isetshenziswa ngokuhlukile. Uhlu lwezihlanganisi ze-hypoglycemic zomlomo, okuvame ukuhlanganiswa ngalo i-hormonal, yile:
I-insulin esebenza isikhathi eside ingathathwa njengedivayisi eyodwa, njengakwamanye amakhambi
Njengomthetho, ukwakheka kokwehlisa ushukela okuhlala isikhathi eside kusetshenziselwa ukufaka izidakamizwa endaweni evamile yokuvezwa. Ngenxa yokuthi ukuze kufinyelelwe umphumela we-basal, ukwakheka kwe-insulin ngokwesilinganiso kuphathwa kabili ngosuku, futhi okude kube kanye ngosuku, ushintsho ekwelashweni kweviki lokuqala kungavusa ukuvela kwe-hypoglycemia yasekuseni noma ebusuku. Lesi simo singalungiswa ngokunciphisa inani lezidakamizwa ezeluliwe ngo-30%, okuphelelisa ngokwengxenye ngokuntuleka kwe-hormone yesikhathi eside usebenzisa i-insulin yohlobo olufushane ngokudla. Ngemuva kwalokho, umthamo wento ye-insulin enwetshiwe uyalungiswa.
Ukwakheka kwe-basal kuhanjiswa kanye noma kabili ngosuku. Ngemuva kokungena emzimbeni ngomjovo, i-hormone iqala ukukhombisa umsebenzi wayo kuphela ngemuva kwamahora ambalwa. Ngasikhathi sinye, izinhlaka zesikhathi zokuvezwa kwento ngayinye yokwehlisa ushukela isikhathi eside eboniswe etafuleni ihlukile. Kepha uma kudingeka i-insulin enwetshiwe, faka inani elidlula i-0,6 Units nge-1 kg yesisindo somuntu, khona-ke umthamo obekiwe wehlukaniswe ngemijovo eyi-2-3.Ngasikhathi sinye, ukuze kungabandakanywa ukwenzeka kwezinkinga, imijovo yenziwa ezingxenyeni ezahlukene zomzimba.
Cabanga indlela yokugwema imiphumela emibi yokwelashwa kwe-insulin.
Noma yiliphi ikhambi le-insulin, kungakhathalekile ukuthi lidalwe isikhathi esingakanani, lingaba nemiphumela emibi:
I-Hypoglycemia - izinga le-glucose egazini lehla ngaphansi kwe-3.0 mmol / L.
Ukuphendula okujwayelekile nokwasendaweni - i-urticaria, ukulunywa nokuqina endaweni yomjovo.
Ukwephulwa kwe-metabolism yamafutha - ebonakaliswa ngokuqongelela kwamafutha, hhayi ngaphansi kwesikhumba kuphela, kodwa nasegazini.
I-insulin esebenza kancane kancane inika ithuba elingcono kakhulu lokuvimbela izinkinga kuhlobo 1 nohlobo 2 sikashukela. Ngaphezu kwalokho, i-insulin ende yenza ukwelapha ushukela kube lula kakhulu. Ukuze kungabandakanywa ukubonakaliswa kwale miphumela emibi, abanesifo sikashukela kufanele balandele ukudla okuyalelwa udokotela nsuku zonke futhi bashintshe indawo yomjovo njalo.
Muva nje, sekuqaliswe izidakamizwa ezimbili ezintsha, ezisebenza isikhathi eside, ezigunyazwe i-FDA, ezimakethe ezisebenza emakethe yemithi yokwelapha iziguli ezinoshukela njengabantu abadala:
UDegludek (okuthiwa nguTresiba).
I-Ryzodeg FlexTouch (Ryzodeg).
I-Tresiba isidakamizwa esisha esivunyiwe yi-FDA
I-insulin esebenza isikhathi eside esebenza nge-insulin ihloselwe ukuphatha okungaqondakali. Isikhathi sokulawulwa kwe-glucose enegazi cishe singamahora angama-40. Isetshenziselwa ukwelapha abanesifo sikashukela ngendlela yokuqala neyesibili yokuxakaxaka kwezifo. Ukufakazela ukuphepha nokusebenza kahle kwalo muthi omusha okhululiwe, uchungechunge locwaningo lwenziwa lapho iziguli zabantu abadala ezingaphezu kuka-2 000 zahlanganyela. I-Degludec isetshenziswe njengesijobelelo ekwelashweni ngomlomo.
Kuze kube manje, ukusetshenziswa kwesidakamizwa i-Degludec kuvunyelwe e-EU, Canada nase-USA. Emakethe yasekhaya, kwavela intuthuko entsha ngaphansi kwegama elithi Tresiba. Ukuqanjwa kutholakala ngokugxilwa okubili: 100 no-200 U / ml, ngesimo sepeni. Manje kungenzeka ukuvumisa ngokwejwayelekile izinga loshukela egazini ngosizo lwe-super-agent esebenza isikhathi eside ngokusebenzisa isisombululo se-insulin kathathu kuphela ngeviki.
Sichaza ukulungiswa kweRyzodeg. I-ejenti ye-Ryzodeg enwetshiwe-ukuhlanganiswa yinhlanganisela yama-hormone, amagama lawo aziwa kahle kwabanesifo sikashukela, njenge-basal insulin Degludec ne-Aspart esebenza ngokushesha (isilinganiso esingu-70:30). Izinto ezimbili ezinjenge-insulin ngendlela ethile zisebenzelana nama-insulin receptors, ngenxa yalokho athola umphumela wazo we-pharmacological ofanayo nomphumela we-insulin yomuntu.
Ukuphepha kanye nokusebenza kahle kwesidakamizwa esivele sisebenza kudala satholwa yisivivinyo somtholampilo lapho abantu abathathu bakashukela baba nengxenye khona.
I-Ryzodeg yathathwa ihlanganiswa nokunye ukudla okwehlisa ushukela. Ngenxa yalokhu, ukuncishiswa koshukela wegazi kutholakale kufinyelela ezingeni ebelitholakala kuphela ngokusetshenziswa kwamalungiselelo we-insulin osebenza isikhathi eside.
Izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside ngamahomoni uTresiba noRyzodeg zifakwa kubantu abanenkinga yesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, le mishanguzo, njengoba imidwebo exoxwe ngayo ngenhla, kufanele ichazwe udokotela kuphela, ngaphandle kwalokho imiphumela emibi ngohlobo lwe-hypoglycemia kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zokungezwani komzimba ngeke kugwenywe.
Ama-insulin asebenza ngokufushane: amagama ezidakamizwa nezindlela zokuzisebenzisa
I-insulin yi-hormone ekhiqizwa amaseli e-endocrine ama-pancreas. Umsebenzi wawo oyinhloko ukugcina i-carbohydrate ibhalansi.
Ukulungiselela i-insulin kubekelwe ushukela. Lesi simo sibonakaliswa ngokufihlwa okunganele kwehormone noma ukwephulwa kwesenzo saso kwezicubu zomzimba. Imithi yehluka ngesakhiwo samakhemikhali kanye nobude bomphumela. Amafomu amafushane asetshenziselwa ukunciphisa ushukela ofakwe ngokudla.
I-insulin ibekelwa ukuguqula amazinga kashukela egazini ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zesifo sikashukela. Izinkomba zokusetshenziswa kwehomoni yilezi zinhlobo ezilandelayo zesifo:
Thayipha isifo sikashukela esingu-1 esihambisana nomonakalo we-autoimmune kumaseli e-endocrine kanye nokuthuthukiswa kokushoda kwe-hormone ngokuphelele,
Uhlobo 2, olubonakala ngokuntuleka kwe-insulin ngenxa yesiphene ekwakhekeni kwalo noma ukuncipha kokuzwela kwezicubu zephutha esenzweni salo,
isifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe
ifomu le-pancreatic lesifo, elingumphumela wepancreatitis oyingozi noma ongamahlalakhona,
izinhlobo ezingavimbeli mzimba ze-pathology - ama-syndromes weWolfram, Rogers, IMODY 5, isifo sikashukela se-neonatal nabanye.
Ngaphezu komphumela wokwehlisa ushukela, amalungiselelo e-insulin anomphumela we-anabolic - anikela ekukhuleni kwemisipha nasekuvuseleleni amathambo. Le mpahla ivame ukusetshenziswa ekwakheni umzimba. Kodwa-ke, emiyalweni esemthethweni yokusetshenziswa, le nkomba ayibhalisiwe, futhi ukuphathwa kwehomoni kumuntu onempilo kusongela ngokuhla okukhulu kweglucose yegazi - hypoglycemia. Isimo esinjalo singahambisana nokulahlekelwa ukwazi kuze kufike ekukhuleni komqondo nokufa.
Ngokuya ngendlela yokukhiqiza, amalungiselelo ayenzelwe izakhi zofuzo kanye nokufana kwabantu ahlukanisiwe. Umphumela wamakhemikhali wokugcina ungokomzimba ngokwengeziwe, ngoba ukwakheka kwamakhemikhali alezi zinto kufana ne-insulin yomuntu. Zonke izidakamizwa ziyehluka ngesikhathi sokusebenza.
Emini, i-hormone ingena egazini ngejubane elihlukile. Ukuvikelwa kwayo okuyisisekelo kukuvumela ukuba ulondoloze ukugcwala okuningana koshukela kungakhathaleki ukuthi kudliwe kangakanani. Ukukhishwa kwe-insulin okuvuselelekile kwenzeka ngesikhathi sokudla. Kulokhu, izinga le-glucose engena emzimbeni ngokudla okuqukethe ama-carbohydrate liyancipha. Ngesifo sikashukela, lezi zinqubo ziyaphazamiseka, okuholela emiphumeleni emibi. Ngakho-ke, enye yemigomo yokwelapha lesi sifo ukubuyisela isigqi esifanele sokukhishwa kwe-hormone egazini.
Secretion yezemvelo insulin
Ama-insulin asebenza ngokufushane asetshenziselwa ukulingisa ukugcinwa kwe-hormone okuvuswe okuhambisana nokudla kokudla. Izinga elingemuva lisekela izidakamizwa ngesenzo sesikhathi eside.
Ngokungafani nezidakamizwa ezisezingeni eliphakeme, amafomu andisiwe asetshenziswa kungakhathalekile ukuthi kudliwe.
Ukuhlukaniswa kwe-insulin kwethulwe etafuleni:
I-insulin yi-hormone evikelwe amaseli e-pancreatic. Umsebenzi wawo ophambili ukuphatha i-carbohydrate metabolism kanye “nokunciphisa” ushukela okhulayo.
Indlela yokusebenza isebenza kanjena: umuntu uqala ukudla, ngemuva kokukhiqizwa i-insulin imizuzu emi-5, ulinganisa ushukela, ukhuphuke ngemuva kokudla.
Uma ama-pancreas engasebenzi kahle futhi i-hormone ingasebenzi ngokwanele, kuvela ushukela.
Izindlela ezinomusa zokubekezelela i-glucose ephazamisekile azidingi ukwelashwa, kwezinye izimo, awukwazi ukwenza ngaphandle kwazo. Eminye imishanguzo ijova kanye ngosuku, kanti eminye njalo ngaphambi kokudla.
I-insulin ebambela amafushane iqala ukusebenza imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ngemuva kokungenelela. Ngemuva kwalesi sikhathi, isiguli kumele sidle. Ukweqa ukudla akumukelekile.
Isikhathi somphumela wokwelapha sifinyelela emahoreni angama-5, cishe isikhathi esiningi siyadingeka ukuze umzimba ugaye ukudla. Isenzo sehomoni sidlula kakhulu isikhathi sokwandisa ushukela ngemuva kokudla. Ukuze ulinganise inani le-insulin ne-glucose, ngemuva kwamahora angama-2,5 kunconywa izakhamizi zesifo sikashukela.
I-insulin esheshayo imvama ukubekelwa iziguli ezinokwenyuka okuqinile kwe-glucose ngemuva kokudla. Uma uyisebenzisa, kuyadingeka ukuthi ucabangele izinto ezithile ezifihlakele:
usayizi wokusebenzela kufanele uhlale ucishe ufane
umthamo womuthi ubalwa ubheka inani lokudla okudliwayo ukwenzela ukwentuleka kokushoda kwe-hormone emzimbeni wesiguli,
uma inani lomuthi lingafakwanga ngokwanele, i-hyperglycemia iyenzeka,
umthamo omkhulu kakhulu uzovusa i-hypoglycemia.
Zombili i-hypo- ne-hyperglycemia ziyingozi kakhulu esigulini esinesifo sikashukela, ngoba zingavusa izinkinga ezinkulu.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 ezikudla okune-carb encane ziyelulekwa ukuthi zisebenzise i-insulin ngokushesha. Ngokushoda kwe-carbohydrate, ingxenye yamaprotheni ngemuva kwe-cleavage iguqulwa ibe ushukela. Le yinqubo ende, futhi isenzo se-insulin ye-ultrashort siqala ngokushesha okukhulu.
Kodwa-ke, noma ngubani onesifo sikashukela welulekwa ukuba aphathe umthamo we-hormone ye-ultrafast uma kunesimo esiphuthumayo. Uma ngemuva kokudla ushukela ekhuphukele ezingeni elibucayi, i-hormone enjalo izosiza ngangokunokwenzeka.
Ungasibala kanjani isilinganiso se-insulin esikhathi nobude besenzo
Ngenxa yokuthi isiguli ngasinye sinokuthola kwaso izidakamizwa, inani lemithi nesikhathi sokulinda ngaphambi kokudla kufanele kubalwe ngawodokotela ngamunye.
Umuthi wokuqala kufanele uklanywe imizuzu engama-45 ngaphambi kokudla. Ngemuva kwalokho ukusebenzisa i-glucometer njalo ngemizuzu emi-5 ukurekhoda izinguquko kushukela. Lapho ushukela usunciphile ngo-0.3 mmol / L, ungadla.
Ukubalwa okulungile kwesikhathi somuthi kuyisihluthulelo sokwelashwa okusebenzayo kwesifo sikashukela.
Isenzo se-insulin ye-ultrashort senzeka ngokushesha. Lokhu ngumehluko wawo ophambili: isiguli akufanele silinde isikhathi esinqunyelwe sokuba umuthi ube nomphumela. Kunqunyelwe iziguli ezingasizi i-insulin esheshayo.
I-hormone yokuqala yesenzo yadalelwa ukuvumela abanesifo sikashukela ukuthi bangenele kuma-carbohydrate asheshayo ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi amaswidi. Kodwa-ke, empeleni, lokhu akunjalo.
Noma imiphi i-carbohydrate egayeka kalula izonyusa ushukela kungekudala kune-insulin esebenza ngokushesha.
Kungakho ukudla okune-carb ephansi kuyitshe lokunakekelwa kwesifo sikashukela. Unamathela ekudleni okunqunyelwe, isiguli singanciphisa kakhulu amathuba okuba nezinkinga ezinkulu.
I-insulin ye-Ultrafast yi-hormone yomuntu enesakhiwo esithuthukisiwe. Ingasetshenziselwa uhlobo 1 lwesifo sikashukela, kanye nabesifazane abakhulelwe.
Njenganoma yimuphi umuthi, i-insulin emfushane inamandla ayo nobuthakathaka bayo.
lolu hlobo lwe-insulin lwehlisela igazi esimweni esejwayelekile ngaphandle kokuvusa i-hypoglycemia,
Umphumela oqinile kushukela
Kulula ukubala usayizi nokwakheka kwengxenye engadliwa, ngemuva kwesikhathi esibekiwe ngemuva komjovo,
ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwe-hormone kukhuthaza ukumuncwa kokudla okungcono, ngesifiso sokuthi isiguli silandela ukudla okunqunyelwe.
Isidingo sokulinda imizuzu engama-30 kuye kwengama-40 ngaphambi kokudla. Kwezinye izimo, lokhu kunzima kakhulu. Isibonelo, endleleni, emcimbini.
Umphumela wokwelapha awenzeki ngokushesha, okusho ukuthi umuthi onjalo awulungele ukukhululeka okusheshayo kwe-hyperglycemia.
Njengoba i-insulin enjalo inomphumela oqhubeka isikhathi eside, ukudonswa kokudla okungeziwe kuyadingeka emahoreni angama-2,5 ukuya kwengu-1 emva komjovo wokuqinisa izinga loshukela.
Emsebenzini wezokwelapha, kukhona abantu abanesifo sikashukela abanokuxilongwa okukhishwa kancane kwesisu.
Lezi ziguli zidinga ukujojwa nge-insulin esheshayo amahora 1.5 ngaphambi kokudla.Ezimweni eziningi, lokhu kuyaphazamisa kakhulu. Kulokhu, ukuphela kwendlela ukusetshenziswa kwehomoni yesenzo se-ultrafast.
Kunoma ikuphi, udokotela kuphela ongakunquma lokhu noma lowo muthi. Ukushintshwa kusuka komunye umuthi uye komunye kufanele futhi kwenziwe ngaphansi kokuqashwa ngudokotela.
Njengamanje, ukukhetha kwamalungiselelo we-insulin okusheshayo kubanzi impela. Imvamisa, intengo incike kumenzi.
Ithebula: "Abasubathi abasebenza ngokushesha"
I-Humalog iyi-analogue ye-insulin yabantu. Uketshezi olungenamibala olutholakalayo kuma-cartilitha angu-3 millilita. Indlela eyamukelekayo yokuphatha ihamba ngendlela futhi ibuthana. Isikhathi sokusebenza sifinyelela emahoreni angama-5. Kuya ngomthamo okhethiwe kanye nobuthakathaka bomzimba, izinga lokushisa lomzimba wesiguli, kanye nendawo yomjovo.
Uma isingeniso besingaphansi kwesikhumba, khona-ke ukuqoqeka okukhulu kwehomoni egazini izoba engxenyeni yehora - ihora.
I-Humalog inganikezwa ngaphambi kokudla, kanye nangemva kwayo ngemuva kwayo. Ukuphathwa kwe-subcutaneous kwenziwa ehlombe, isisu, i-buttock noma ethangeni.
Into esebenzayo yesidakamizwa i-Novorapid Penfill yi-insulin aspart. Le yi-analogue ye-hormone yomuntu. Luwuketshezi ngaphandle kombala, ngaphandle kokudlengwa. Umuthi onjalo uvunyelwe ezinganeni ezingaphezu kweminyaka emibili. Ngokuvamile, isidingo sansuku zonke se-insulin sisukela ku-0,5 kuye ku-1 UNITS, ngokuya ngesisindo somzimba sikashukela.
I- "Apidra" isidakamizwa saseJalimane, into esebenzayo i-insulin glulisin. Lokhu kungenye i-analogue ye-hormone yomuntu. Njengoba ucwaningo lomphumela walesi sidakamizwa lungazange lwenziwe kubantu besifazane abakhulelwe, ukusetshenziswa kwalo kweqembu leziguli akulungile. Okufanayo kuya kwabesifazane abambekelayo.
I-Rosinsulin R isidakamizwa esenziwe eRussia. Umuthi osebenzayo uklanywe ngofuzo insulin yomuntu. Umenzi utusa ukuphathwa ngaphambi kokudla noma amahora 1.5-2 emva kwawo. Ngaphambi kokusetshenziswa, kuyadingeka ukuthi uhlolisise uketshezi ngobukhona be-turbidity, sediment. Kulokhu, i-hormone ayikwazi ukusetshenziswa.
Umphumela oyinhloko wokulungiselela okusheshayo kwe-insulin yi-hypoglycemia. Uhlobo lwayo olumnene aludingi ukulungiswa kwamthamo umuthi nokunakekelwa kwezokwelapha. Uma ushukela ophansi wedlulele ezingeni eliphakathi noma elibucayi, ukunakekelwa okuphuthumayo kuyadingeka. Ngaphezu kwe-hypoglycemia, iziguli zingathola i-lipodystrophy, i-pruritus, ne-urticaria.
AmaNicotine, ama-COC, ama-hormone egilo, ama-antidepressant kanye nezinye izidakamizwa enza buthaka imiphumela ye-insulin kushukela. Kulokhu, udinga ukulungisa umthamo we-hormone. Uma ezinye izidakamizwa ziphuza iziguli nsuku zonke, kufanele azise udokotela ohambayo ngalokhu.
Njengawo wonke umuthi, amalungiselelo e-insulin asheshayo ane-contraindication yawo. Lokhu kufaka phakathi:
izifo ezithile zenhliziyo, ikakhulukazi isici,
Lapho kukhona izifo ezinjalo, irejimeni yokwelashwa ikhethwa ngawodwana.
Ukulungiswa kwe-insulin okusheshayo kunqunyelwa kwabanesifo sikashukela njengekhambi. Ukufinyelela umphumela omkhulu wokwelashwa, ukubambelela ngokuqinile ku-dosing, ukunamathela ekudleni kuyadingeka. Ukushintsha inani lamahomoni aphathisiwe, ukufaka elinye esikhundleni kwelinye kungenzeka kuphela ngesivumelwano nodokotela.
Kwe-pharmacology, ama-insulin angama-hormone akhethekile akuvumela ukuthi ulawule amazinga kashukela egazini. Umkhakha wanamuhla wemithi, le mithi ikhiqizwa ngezinhlobonhlobo ezinkulu. Ziyahluka ngohlobo lwesifutho, izindlela zokulungiselela nesikhathi sokusebenza. Okuthandwa kakhulu yi-insulin esebenza ngokufushane.Lesi sidakamizwa ikakhulukazi senzelwe ukukhululeka okusheshayo kweziqongo zokudla, kodwa futhi singasetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela okuhlangene.
Ama-insulin asebenza ngokufushane awancibilikisi futhi ayakwazi ukusheshe enze ngokwejwayelekile izinqubo ze-metabolic emzimbeni womuntu ezihambisana nokumuncwa kweglucose. Ngokungafani nama-insulin asebenza isikhathi eside, amalungiselelo we-hormonal enza okufushane aqukethe isisombululo se-hormonal esingacwengekile esingenazo ezinye izithasiselo. Isici esihlukile semithi enjalo ukuthi baqala ukusebenza ngokushesha okukhulu futhi ngesikhathi esifushane bayakwazi ukwehlisa amazinga kashukela egazi abe evamile. Umsebenzi wethamo lomuthi ubonwa cishe amahora amabili ngemuva kokuphathwa kwawo, bese kuba nokwehla ngokushesha kwesenzo sawo. Ngemuva kwamahora ayisithupha egazini kukhona iminonjana emincane yomenzeli olawulwa ngamahomoni. Le mishanguzo ihlukaniswa ngamaqembu alandelayo ngokwesikhathi sokwenza kwayo:
Ama-insulin asebenza ngokufushane aqala ukusebenza imizuzu engama-30 ngemuva kokuphatha. Kunconywa ukuthi zingathathi isikhathi esingaphansi kwesigamu sehora ngaphambi kokudla.
I-Ultrashort insulins eqala ukusebenza ngemuva kwekota yehora. Le mishanguzo inconywa ukuthi ithathwe cishe imizuzu emi-5 kuya kweli-10 ngaphambi kokudla noma ngokushesha ngemuva kokudla.
Etafuleni elingezansi, ukuqhathanisa, amanani wejubane kanye nesikhathi sokusebenza kwezinhlobo ezahlukahlukene zama-ejenti ama-hormone kuvezwa. Amagama emishanguzo anikezwa ngokukhetha, ngoba kunenombolo enkulu yezinhlobo zawo.
I-insulin emfushane umuthi ohlanzekile we-hormonal owenziwe ngezindlela ezimbili:
kususelwa ku-insulin yezilwane (i-porcine),
kusetshenziswa ubuchwepheshe be-biosynthesis besebenzisa ubuchwepheshe bobuchwepheshe bofuzo
Kokubili lokho, nenye indlela okufana ngokuphelele ne-hormone yemvelo yomuntu, ngakho-ke kunomphumela omuhle okwehlisa ushukela. Ngokungafani nezidakamizwa ezisebenza isikhathi eside, azinazo izithasiselo, ngakho-ke cishe azibi neze zibangele ukungezwani komzimba. Ukugcina amazinga kashukela egazi evamile ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, ama-insulin amafushane, anikezwa cishe isigamu sehora ngaphambi kokudla, kuvame ukusetshenziswa. Kubalulekile ukuqonda ukuthi isiguli ngasinye sinezimpawu zokuphila ngokomzimba, ngakho-ke, ukubalwa kwevolumu edingekayo yesidakamizwa ngaso sonke isikhathi kwenziwa ngudokotela uqobo. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuthi inani lokudla elithathiwe lihambelana nomthamo olungiselelwe we-insulin. Imithetho eyisisekelo yokusebenzisa umuthi we-hormonal ngaphambi kokudla imi kanje:
Ngomjovo, udinga ukusebenzisa kuphela isirinji ekhethekile ye-insulin, ekuvumela ukuthi ufake umthamo ngqo onqunywe ngudokotela.
Isikhathi sokuphatha kufanele sibe njalo, futhi indawo yomjovo kufanele ishintshwe.
Indawo okwenziwe kuyo umjovo ayinakunyakaziswa, ngoba ukufakwa umuthi okungokwemvelo egazini kufanele kube bushelelezi.
I-Ultrashort insulin iyi-analogue eguquliwe ye-insulin yabantu, lokhu kuchaza ijubane eliphezulu lemiphumela yayo. Lesi sidakamizwa sakhiwa ngenhloso yosizo oluphuthumayo kumuntu oye wazibonela ukuthi ugxumela ushukela wegazi ngezizathu ezahlukahlukene. Kungakho kungasasetshenziswa kakhulu ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kwesifo sikashukela. Kuhlongozwa futhi umjovo we-insulin ye-ultrashort ecaleni lapho umuntu engenalo ithuba lokulinda isikhathi esithile ngaphambi kokudla. Kepha ngaphansi kwesimo sokudla okufanele, lesi sidakamizwa asinconywa ukuba sithathwe, ngenxa yokuthi sinokwehla okuqinile kwesenzo kusuka kunani eliphakeme kakhulu, ngakho-ke kunzima kakhulu ukubala umthamo ofanele.
Ama-insulin amafushane ne-ultrashort asetshenziswa kabanzi namuhla ekwakhiweni komzimba. Izidakamizwa zithathwa njengezisebenzayo kakhulu ama-anabolic agents.Umnyombo wokusebenzisa kwabo ukwakheka komzimba ukuthi i-insulin iyi-hormone yezokuthutha engabamba ushukela bese iwunikeza emisipha ephendula kulokhu kukhula okusheshayo. Kubaluleke kakhulu ukuthi abasubathi baqale ukusebenzisa umuthi we-hormonal kancane kancane, ngaleyo ndlela bejwayela umzimba kwi-hormone. Njengoba amalungiselelo e-insulin enezidakamizwa ezinamandla kakhulu ze-hormonal, kwenqatshelwe ukuzithatha kubagadli abasaqala.
Impahla esemqoka ye-insulin ukuthutha izakhi zomzimba. Kepha ngasikhathi sinye, i-hormone yenza lo msebenzi ngezindlela ezahlukahlukene, ezithi:
Kulokhu, uma umuthi we-hormonal uthathwa ngokungalungile, khona-ke awukwazi ukwakha izicubu ezinhle, kepha uthole kabi. Kufanele kukhunjulwe ukuthi lapho uthatha ikhambi, ukuqeqeshwa kufanele kube okusebenzayo. Kulesi simo kuphela, i-hormone yokuhambisa izohambisa i-glucose kwizicubu zomsipha ezithuthukisiwe. Kumgadli ngamunye owenza umsebenzi wokwakha umzimba, umthamo unikezwa umuntu ngamunye. Kusungulwa ngemuva kokulinganisa inani le-glucose egazini nomchamo.
Ukuze ungalethi isizinda semvelo sama-hormone somzimba futhi unganciphisi ukukhiqizwa kwe-insulin ngamanyikwe, kubalulekile ukuthatha ikhefu ngokuthatha izidakamizwa. Ngokukhetha, funa enye yezinyanga ezimbili zokuthatha umuthi ukuphumula izinyanga ezine kuwo.
Njengoba ama-insulin amafushane nama-ultrashort-abamba izidakamizwa ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezifana ne-insulin yabantu, akuvamile ukuba zibange phakathi kwama-allergies. Kepha kwesinye isikhathi umphumela ongathandeki njengokulunywa nokucasulwa endaweni yomjovo kuyabonakala.
Kunconywe ukuthi i-ejenti yama-hormonal ifakwe ngokungenasisekelo emgodini wesisu ngokushesha ngemuva kokuqeqeshwa kwamandla. Udinga ukuqala ngemithamo emincane futhi ngasikhathi sinye udinga ukubheka ukusabela komzimba. Cishe ikota yehora ngemuva komjovo, kufanele kudliwe okuthile okumnandi. Isilinganiso sama-carbohydrate aqediwe kuyunithi yomuthi olungiselelwe kufanele kube yi-10: 1. Emva kwalokho, ngemuva kwehora udinga ukudla kahle, futhi ukudla kufanele kube nokudla okunama-protein amaningi.
I-overdose yesidakamizwa se-hormonal noma ukuphathwa kwayo okungalungile kungadala i-hypoglycemic syndrome, ehambisana nokwehla okukhulu ushukela wegazi. Cishe ngaso sonke isikhathi ngemuva kokuthatha i-ultrashort ne-insulin emfushane kubangela i-hypoglycemia ethambile noma elinganiselayo. Izibonakalisa ngezimpawu ezilandelayo:
isiyezi nokwenza mnyama emehlweni ngokushintsha okubukhali kwesikhundla somzimba,
isimo sokukhathazeka kwangaphakathi nokungaphatheki kahle.
Ngemuva kokuvela okungenani kwalezi zimpawu, kufanele uphuze ngokushesha isiphuzo esikhulu, bese kuthi ngemuva kwengxenye yehora udle ingxenye yokudla kwamaprotheni-carbohydrate. Futhi uphawu oluseceleni lwe-hypoglycemia ukuvela kwesifiso sokulala. Ngokwengxenye akunakwenzeka ukwenza lokhu, ngoba kungenzeka ukwandisa isimo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi nge-overdose ye-insulin emfushane ne-ultrashort, i-coma kungenzeka ngokushesha okukhulu. Uma kwenzeka umuntu elahlekelwe ngumsubathi, kubalulekile ukufuna usizo lodokotela.
Inzuzo eyinhloko yamalungiselelo we-insulin lapho usebenzisa ukwakheka komzimba ukuthi azikwazi ukulandelwa ohlolweni lokufaka doping. I-insulin emfushane ne-ultrashort izidakamizwa eziphephile ezingakuthinti kabi ukusebenza kwezitho zangaphakathi. Okubaluleke nangokuthi iqiniso lokuthi izidakamizwa zingathengwa ngaphandle kwemiyalelo futhi izindleko zazo, uma ziqhathaniswa nezinye i-anabolics, zingabiza kakhulu. Ukudonswa okubaluleke kakhulu kokulungiswa kwe-insulin, kepha okubaluleke kakhulu ngasikhathi sinye, yisidingo sokuthatha ngokuhambisana nesheduli esungulwe ngudokotela.
Russell Jesse Type 2 Diabetes, Book on Demand -, 2012. - 962 c.
IKamysheva, E. ukumelana ne-insulin kushukela. / E. Kamysheva. - EMoscow: Mir, 1977 .-- 750 k.
UDanilova L.A. Ukuhlolwa kwegazi nomchamo. ISt. Petersburg, iDean Publishing House, ka-1999, i-127 pp., Iziyingi ezingama-10,000.
Ngomsuka, i-insulin yile:
Ingulube. Ikhishwa kumanyikwe lezi zilwane, ifana kakhulu nomuntu.
Ezinkomeni. Ngokuvamile kuba nemiphumela engahambi kahle kule insulin, ngoba inomehluko obonakalayo ovela ku-hormone yomuntu.
Okomuntu Ivumelaniswe kusetshenziswa amagciwane.
Ubunjiniyela bezofuzo. Kutholakala engulube, kusetshenziswa ubuchwepheshe obusha, ngenxa yalokhu, i-insulin iyafana nomuntu.
isenzo se-ultrashort (Humalog, Novorapid, njll.),
isenzo esifushane (Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid nabanye),
ubude besikhathi sokusebenza (i-Protafan, Insuman Bazal, njll.),
osebenza isikhathi eside (uLantus, Levemir, Tresiba nabanye).
Ama-insulin amafushane nama-ultrashort asetshenziswa ngaphambi kokudla ngakunye ukugwema ukungena kweglucose futhi kwenze kube ngokwejwayelekile izinga lakhona.I-insulin ephakathi nendawo futhi esetshenziswayo isetshenziswa njengokubizwa ngokuthi ukwelashwa okuyisisekelo, kunqunywa izikhathi eziyi-1-2 ngosuku futhi kugcinwe ushukela ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile isikhathi eside. .
I-insulin emfishane futhi emfushane
Kumele kukhunjulwe ukuthi lapho umphumela womuthi ukhula ngokushesha, umfishane isikhathi sokwenza kwawo. Ama-insulin ase-Ultra-short-acting aqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu eyi-10 yokumunwa, ngakho-ke kumele asetshenziswe ngokushesha ngaphambi noma ngokushesha nje ngemuva kokudla. Banomphumela onamandla amakhulu, cishe izikhathi ezi-2 ezinamandla kunezidakamizwa ezisebenzayo ezimfushane. Umphumela wehlisela ushukela uthatha cishe amahora amathathu.
Le mishanguzo ayivamisile ukusetshenziswa ekwelapheni okunesifo sikashukela okuyinkimbinkimbi, ngoba ukusebenza kwayo kungalawulwa futhi umphumela ungalindeleki. Kepha zibalulekile uma onesifo sikashukela edla, futhi ekhohlwa ukufaka i-insulin yesikhashana. Kulesi simo, umjovo wesidakamizwa we-ultrashort uzoxazulula inkinga futhi usheshe wenze amazinga kashukela egazini abe nawo.
I-insulin esebenza ngokubamba kancane iqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu engama-30, ihanjiswa imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ngaphambi kokudla. Isikhathi salezi zimali cishe amahora ayi-6.
Isheduli yesenzo se-insulin
Umthamo wezidakamizwa ezisebenza ngokushesha ubalwa ngudokotela uqobo, futhi ukufundisa ngezimpawu zesiguli kanye nenkambo yalesi sifo. Futhi, umthamo ophathisiwe ungashintshwa yisiguli ngokuya ngenani lamayunithi esinkwa asetshenzisiwe. Iyunithi eli-1 lomshuwalense obambela isikhashana wethulwa iyunithi elilodwa lesinkwa. Inani eliphezulu elivumelekile lokusetshenziswa okukodwa iyunithi elingu-1 ngekhilogremu eyodwa yesisindo somzimba, uma ngabe leli dosi lidlulile, ubunzima obukhulu kungenzeka.
Ukulungiswa okufushane nokwenziwa nge-ultrashort kuphathwa ngokungaziphathi, okuwukuthi, kwezicubu ezinamafutha ezingaphansi, lokhu kunomthelela ekugelezeni okuhamba kancane komfaniswano nomuthi ungene egazini.
Ukubalwa okunembe kakhudlwana komthamo we-insulin emfushane, kuyasiza kwabanesifo sikashukela ukugcina idayari lapho kudla khona ukudla (ibhulakufesi, isidlo sasemini, njll.) Kuboniswa, ushukela ngemuva kokudla, umuthi olawulwa kanye nomthamo wawo, ukuhlushwa ushukela ngemuva kokujova. Lokhu kuzosiza isiguli ukukhomba iphethini yokuthi umuthi ulithinta kanjani ushukela ngqo kuye.
Ama-insulin amafushane ne-ultrashort asetshenziselwa usizo oluphuthumayo ngokwakhiwa kwe-ketoacidosis.Kulokhu, umuthi uphathwa ngaphakathi, bese isenzo senzeka ngokushesha. Umphumela osheshayo wenza le mishanguzo ibe ngumsizi osemqoka odokotela abezimo eziphuthumayo namayunithi wokunakekelwa kakhulu.
Ithebula - Izici kanye namagama amanye wamalungiselelo we-insulin amafushane nama-ultrashort
Uhlobo lwesidakamizwa ngejubane lesenzo
Uhlobo lwesidakamizwa ngokwemvelaphi
I-Apidra Amafushane e-Ultra Ubunjiniyela bezofuzo 0-10 imizuzu 3 amahora Ngehora
I-NovoRapid Amafushane e-Ultra Ubunjiniyela bezofuzo Imizuzu engu-10 - 20 Amahora angama-3-5 Ngemuva kwamahora angama-1-3
Isi-Humalogue Amafushane e-Ultra Ubunjiniyela bezofuzo Imizuzu engu-10 - 20 Amahora ama-3-4 Ngemuva kwamahora we-0.5-1,5
I-Actrapid Kafushane Ubunjiniyela bezofuzo Imizuzu engama-30 Amahora angama-7-8 Ngemuva kwamahora ayi-1.5-3,5
Gansulin r Kafushane Ubunjiniyela bezofuzo Imizuzu engama-30 Amahora angu-8 Ngemuva kwamahora angama-1-3
Humulin Njalo Kafushane Ubunjiniyela bezofuzo Imizuzu engama-30 Amahora angama-5-7 Ngemuva kwamahora angama-1-3
I-RapT GT Kafushane Ubunjiniyela bezofuzo Imizuzu engama-30 Amahora angama-7-9 Ngemuva kwamahora angu-1 - 4
Kumele kukhunjulwe ukuthi izinga lokufakwa kanye nokuqala kokusebenza kwomuthi kuncike ezintweni eziningi:
Imithamo umuthi. Lapho likhulu inani lokufaka, ngokushesha kuba umphumela.
Indawo yomjovo. Isenzo esisheshayo siqala lapho sifakwe esiswini.
Ubukhulu besendlalelo samafutha angaphansi. Lapho likhulu, kuncipha kakhulu ukufakwa kwalo muthi.
I-Insulin Ephakathi Nesikhathi Eside
Le mishanguzo ichazwa njengendlela yokwelashwa eyisisekelo yesifo sikashukela. Zikhishwa nsuku zonke ngasikhathi sinye ekuseni kanye / noma kusihlwa, kungakhathalekile ukuthi kudliwani.
Imithi yesikhathi sokusebenza esinqunyiwe imiselwe izikhathi ezi-2 ngosuku. Umphumela ngemuva kokulimala kwenzeka ngaphakathi kwamahora we-1-1,5, futhi umphumela uhlala amahora angama-20.
I-insulin esebenza isikhathi eside, noma ihlala isikhathi eside, ingabekwa kanye ngosuku, kunezidakamizwa ezingasetshenziswa noma kanye njalo ezinsukwini ezimbili. Umphumela kwenzeka emahoreni angama-1-3 ngemuva kokuphatha futhi uthatha amahora okungenani angama-24. Inzuzo yale mishanguzo yokuthi ayinayo inani eliphakeme lomsebenzi, kodwa idala ukuhlangana okungatheni kwegazi.
Uma imijovo ye-insulin ibekelwa amahlandla ama-2 ngosuku, khona-ke 2/3 yesidakamizwa iphathwa ngaphambi kokudla kwasekuseni, kanye no-1/3 ngaphambi kokudla kwakusihlwa.
Ithebula - Izici zezidakamizwa ezithile zesikhathi esiphakathi nesikhathi eside somsebenzi
I-Humulin NPH Okuphakathi Ihora eli-1 Amahora 18-18 2-8 amahora kamuva
I-Insuman Bazal Okuphakathi Ihora eli-1 11-16 amahora Ngemuva kwamahora ama-3-4
I-Protofan NM Okuphakathi 1,5 ihora Kufika emahoreni angama-24 Ngemuva kwamahora angama-4- 12
I-Lantus Kuhlala isikhathi eside Ihora eli-1 Amahora angama-24- 29 —
I-Levemir Kuhlala isikhathi eside Amahora ama-3-4 Amahora angama-24 —
I-Humulin ultralente Kuhlala isikhathi eside Amahora ama-3-4 Amahora angama-24-30 —
Kunezinhlobo ezimbili zokwelashwa kwe-insulin.
Ngokwesiko noma Kuhlanganisiwe. Kubonakala ngokuthi kunqunyelwe umuthi owodwa kuphela, oqukethe ikhambi elibalulekile ne-insulin esebenza ngokufushane. Inzuzo inani eliphansi lemijovo, kepha ukwelashwa okunjalo akusebenzi kahle ekwelapheni isifo sikashukela. Unaye, isinxephezelo sibi kakhulu futhi nezinkinga zenzeka ngokushesha.
Ukwelashwa kwendabuko kubekelwe iziguli esezikhulile nabantu abangakwazi ukulawula ukwelashwa ngokuphelele futhi babalwe nomthamo womuthi omfishane. Lokhu kufaka, ngokwesibonelo, abantu abanokuphazamiseka kwengqondo noma abangakwazi ukuzisebenza.
Ukwelashwa Basis Bolus. Ngolu hlobo lokwelashwa, izidakamizwa eziyisisekelo, izidakamizwa ezinde noma eziphakathi, nezidlala izidakamizwa ezifushane ezihlotsheni ezihlukile ziyabekelwa. Ukwelashwa nge-basis-bolus kubhekwa njengeyona ndlela yokwelashwa engcono kunazo zonke, kukhombisa ngokuqondile ukucasheka ngokomzimba kwe-insulin futhi, uma kunokwenzeka, kunqunywe kuzo zonke iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus.
Imijovo ye-insulin yenziwa kusetshenziswa isirinji ye-insulin noma isirinji. Lezi zokugcina zilungele ukusebenzisa futhi umuthi ngokunemba umuthi, ngakho-ke zithandwa. Unganikeza ngisho nomjovo ngepeni yesirinji ngaphandle kokukhumula izingubo zakho, ezilungele, ikakhulukazi uma umuntu esemsebenzini noma esikhungweni semfundo.
I-insulin ifakwa ezicathulweni ezinamafutha ezingaphansi zezindawo ezihlukene, imvamisa ingaphezulu kwekhanda, isisu kanye nehlombe. Izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside zingancamela ukuthinta ethangeni noma kwangaphandle elikhazimulayo elingaphandle, zibambe isikhashana esiswini noma ehlombe.
Imfuneko ukuhambisana nemithetho ye-aseptic, kuyadingeka ukugeza izandla zakho ngaphambi komjovo futhi usebenzise isirinji kuphela. Kumele kukhunjulwe ukuthi i-alcohol ibhubhisa i-insulin, ngakho-ke, ngemuva kokuthi indawo yomjovo selashwe nge-antiseptic, kuyadingeka ukulinda kuze kube yilapho isomile ngokuphelele, bese uqhubeka nokuphatha umuthi. Kubalulekile futhi ukuthi uphambuke endaweni yomjovo eyedlule okungenani amasentimitha amabili.
Indlela entsha yokwelapha ushukela nge-insulin yiphampu ye-insulin.
Impompo yithuluzi (iphampu uqobo, idamu eline-insulin ne-cannula yokuphatha umuthi), lapho i-insulin ihlinzekelwa khona njalo. Lokhu kungenye indlela enhle yokujova yansuku zonke. Emhlabeni, abantu abaningi bayashintsha kule ndlela yokusebenzisa i-insulin.
Njengoba umuthi uhlinzekwa ngokuqhubekayo, kusetshenziswa kuphela ama-insulin amafushane noma abambelela ngokufushane.
Amanye amadivaysi afakelwe ama-sensor level sensors, wona uqobo abheka umthamo odingekayo we-insulin, enikezwe insulin esegazini futhi adle ukudla. Umuthi udotshwa ngokunembe kakhulu, ngokuhlukile kunokwethulwa kwesirinji.
Kepha le ndlela futhi inezingqinamba zayo. Isifo sikashukela sincika ngokuphelele kubuchwepheshe, futhi uma ngasizathu simbe idivaysi iyeka ukusebenza (i-insulin iphelile, ibhethri seliphelelwe), isiguli singathola i-ketoacidosis.
Futhi, abantu abasebenzisa iphampu kufanele bakhuthazelele ezinye zezinto eziphazamisayo ezihambisana nokugqokwa njalo kwensiza, ikakhulukazi kubantu abahola indlela yokuphila esebenzayo.
Isici esibalulekile izindleko eziphakeme zale ndlela yokusebenzisa i-insulin.
Umuthi awumi namanje, kuvela izidakamizwa ezintsha ezengeziwe, okwenza impilo ibe lula kubantu abahlushwa isifo sikashukela. Isibonelo, manje, izidakamizwa ezisuselwa kufakwe i-insulin esetshenzisiwe ziyahlolwa. Kepha udinga ukukhumbula ukuthi uchwepheshe kuphela ongakunquma, ashintshe umuthi, indlela noma imvamisa yokuphatha. Ukuzelapha ngokwakho ngesifo sikashukela kugcwele imiphumela emibi.
Ekuqaleni kwesenzo, ukuqala 'kokuphakama' kanye nesikhathi somphumela, lezi zinhlobo ezilandelayo zemithi ziyahlukaniswa:
I-insulin esebenza ngokufushane ibizwa nangokuthi i-insulin yokudla. Uyakwazi ukumisa iziqongo futhi abe nomphumela wehora le-10 ukuya kwengxenye yehora ngemuva kokujova. Leli qembu lifaka imithi ye-ultrashort nezenzo ezimfushane.
Insulin okuhlala isikhathi eside - igama lesibili "basal". Lokhu kufaka phakathi izidakamizwa zesikhathi esiphakathi nezidakamizwa ezisebenza isikhathi eside. Inhloso yokwazisa kwabo isuselwa ekugcineni inani elijwayelekile le-insulin egazini usuku lonke. Umphumela wazo ungakhula kusuka emahoreni angu-1 kuye kwayi-4.
Ngaphezu kwesilinganiso sokuphendula, kunolunye umehluko phakathi kwamaqembu wezidakamizwa. Isibonelo, i-insulin emfushane ifakwa esifundeni sodonga lwesibeletho esingaphandle ukuze izinqubo zokufakwa emzimbeni zisheshe. Ukufakwa insulin isikhathi eside kulawulwa kahle ethangeni.
Izindlela ze-ultrashort nezenzo ezimfushane zihlala ziboshwe isikhathi sokutholwa kokudla emzimbeni. Zilawulwa ngaphambi kokudla ukunciphisa amazinga kashukela ngemuva kokudla ukudla okunama-carbohydrate ekwakhekeni kwawo. Izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside zisetshenziswa ngokuqinile ngokohlelo ekuseni nakusihlwa.Abazixhumi ngokudla.
Umuthi ngamunye unezici ezithile zokwakheka nemiphumela emzimbeni womuntu, okufanele icatshangwe kabanzi.
Imiyalo yokusebenzisa umuthi ikhombisa ukuthi leli thuluzi yi-analogue ye-insulin yabantu. Isakhiwo saso sinokulandelana okuphindayo kwezinsalela zama-amino acid athile kule molekyuli. Kuwo wonke ama-insulin asebenza ngamafuphi, lena inamandla okuqala nokuphela okusheshayo. Ukwehla kweshukela egazini kwenzeka ngaphakathi kwemizuzu engu-15 ngemuva komjovo, kuthatha amahora angama-3.
Izinkomba zokuqokwa kweHumalog:
uhlobo lwesifo sikashukela esincike ku-insulin,
ukungabekezeleleki kwezinye izidakamizwa ezenziwa ngama-hormone,
I-hyperglycemia eyenzeka ngemuva kokudla, engalungiswa ngenye indlela,
uhlobo olungathembeli kwe-insulin ngokumelana nezidakamizwa ezinciphisa ushukela wethebhulethi,
uhlobo lwesifo sikashukela esingathembisi i-insulin ngokuhambisana nokuhlinzwa noma izifo ezihlangene ezithuthukisa ukubonakaliswa kwesifo “esimnandi”.
Umthamo we-insulin amafushane ukhethiwe ngamunye. I-Humalog in vials ingahanjiswa hhayi kuphela ngaphandle kokuphamba, kepha futhi nakumisipha, ibe umthambo. Kumakherothi - kuphela ngokungakhethi. Umuthi uphathwa ngaphambi kokuba ukudla kungeniswe (kufinyelela izikhathi ezi-6 ngosuku), kuhlanganiswe nama-insulin amade.
Imiphumela emibi yesicelo ingaba ukwehla kancane koshukela wegazi, ngesimo se-precoma, ukhehla, ama-pathologies abonakalayo, ukungezwani komzimba, i-lipodystrophy (ukwehla kongqimba lwamafutha angaphansi kwesizinda sokuphathwa njalo).
Igama lomuthi (NM) libonisa ukuthi into yalo esebenzayo yi-biosynthetic insulin yomuntu. I-Actrapid NM yehlisa ushukela ngemuva kwengxenye yehora, ubude besikhathi - kufinyelela emahoreni angama-8. Umuthi unqunyelwe uhlobo olususelwa ku-insulin lwe- “matenda amnandi”, kanye nesifo sohlobo 2 oluhambisana nalezi zimo ezilandelayo:
ukulahleka kokuzwela kumathebulethi we-hypoglycemic,
ukuba khona kwezifo ezithinta umzimba (lezo ezikhulisa inkambo yesifo esingaphansi),
isikhathi sokuzala ingane.
I-Actrapid NM ikhonjelwa izimo ze-hyperglycemic (ketoacidosis, hyperosmolar coma), hypersensitivity kwimikhiqizo yezilwane, ngokumelene nesizinda sokudluliselwa kwamaseli kwama-islets aseLangerhans-Sobolev.
Ukwethulwa kwe-insulin emfushane kungenzeka ngezikhathi ezintathu kuya kwezi-6 ngosuku. Uma isiguli sidluliselwa kulo muthi sisuka komunye i-insulin yomuntu, umthamo awushintshiwe. Endabeni yokudluliswa kwezidakamizwa zemvelaphi yezilwane, umthamo kufanele wehliswe ngo-10%.
Ukuqanjwa kubandakanya i-hormone esondelene ne-insulin yomuntu. Uhlobo lwe-Escherichia coli lubandakanyekile ekuveleni kwayo. Umphumela we-insulin osebenza isikhathi esifushane kwenzeka kungakapheli isigamu sehora futhi uthatha amahora angama-7. I-Insuman Rapid iyatholakala ku-vials kanye nama-cartridgeges wesirinji amapeni.
Izinkomba zokuqokwa kwalo muthi ziyafana ne-Actrapid NM. Kufayiliswa ngaphandle kwemizuzu engu-20 ngaphambi kokungena kokudla emzimbeni, isikhathi ngasinye kushintsha indawo yomjovo. I-Insuman Rapid ingahlanganiswa nokufakwa insulin okuhlala isikhathi eside, okuqukethe amaprotheni njengento eyakha idepho.
Omunye ummeleli we-insulin emfushane, umphumela okuvela kuwo ngaphakathi kwengxenye yehora futhi ungafinyelela amahora angama-8. Isikhathi sokusebenza kuncike kulezi zinto ezilandelayo:
Izici zomzimba womuntu ogulayo.
Ithuluzi limisa kahle ukubonakaliswa kwezimo eziphuthumayo (isifo sikashukela, i-precoma), sinqunyelwe ngesikhathi sokungenelela kokuhlinzwa. I-Homorap 40 ikhonjiswa ezigulini ebuntwaneni nasebusheni, ngesikhathi sokuzala ingane.
Ukufakwa komuthi kwenziwa kuze kube kathathu ngosuku, kukhethwa umuntu ngamunye. Ingahanjiswa kusetshenziswa amaphampu we-insulin noma isirinji efanayo nochungechunge lwe-insulin ende.
Endabeni ye-glucocorticosteroids, ama-beta-blockers, ama-antidepressants kanye nezindlela zokuvimbela inzalo zomlomo ezihlanganisiwe, ukulungiswa kwamthamo komuthi we-hormonal kuyadingeka.
Emgogodleni kuphindwe insulin yabantu. Kutholakala kuma-cartridge kanye namabhodlela. Inika i-subcutaneous (ehlombe, ithanga, udonga lwesibeletho olungaphandle), ukuphathwa kwe-intramuscular and intravenous. Indawo yomjovo kufanele iguquke njalo ukuze indawo efanayo ingaphindwa kaningi ngezinsuku ezingama-30.
ukubonakaliswa komzimba wasendaweni (ubomvu, ukuvuvukala nokulunywa esakhiweni somjovo),
I-Humulin Regular ingathathwa kusukela ekuzalweni. Kulokhu, isilinganiso somuthi sibalwa ngokuya ngesisindo somzimba sesiguli.
Kutholakala ngezindlela eziningi. Ithebula le-insulin nezimpawu zalo kuxoxwa ngazo ngezansi.
Amagama we-Insulin Ukwakheka Inani lezigaba kulungiselelo Inani lempahla esebenzayo ku-1 ml Isikhathi sesenzo
H ejwayelekile U-40 Insulin Eyodwa Amayunithi angama-40 Kufika emahoreni angu-8 (qala ngemizuzu engu-15)
H basal U-40 I-insulin ne-protamine Eyodwa Amayunithi angama-40 Kufika emahoreni angama-20 (qala ngemizuzu engama-40)
H 10/90 U-40 I-insulin ne-protamine Ababili Amayunithi ama-4 Kufika emahoreni angama-18 (qala ngemuva kwemizuzu engama-45)
H 20/80 U-40 I-insulin ne-protamine Ababili Amayunithi ayi-8 Kufika emahoreni angama-16 (qala ngemuva kwemizuzu engama-40)
H 30/70 U-40 I-insulin ne-protamine Ababili Amayunithi ayi-12 Kufika emahoreni langu-15 (qala ngemizuzu engama-40)
H 40/60 U-40 I-insulin ne-protamine Ababili Amayunithi ayi-16 D amahora ayi-15 (qala ngemuva kwemizuzu engama-45)
Ukulungiswa komthamo wokwelashwa kwe-insulin nezidakamizwa ezichaziwe kuyadingeka ezifweni zezakhi zofuzo ezithathelwanayo, ukungenelela kokuhlinzwa, ngesikhathi sokukhulelwa, nge-pathology ye-yegilo gland, i-renal and adrenal insuffence, kanye "nokugula okumnandi" kubantu asebekhulile.
Amaqembu alandelayo emithi angaqhakambisa umphumela we-hypoglycemic wezidakamizwa, okufanele ucatshangelwe lapho ukhetha irejimeni yokwelashwa:
ukuhlanganisa inzalo yomlomo,
umuthi osuselwa ku-testosterone
ama-antibiotics (iqembu le-tetracycline),
Imikhiqizo esekwe ku-Ethanol
Ukwakha umzimba iDemo ngokubamba iqhaza
Emhlabeni wanamuhla, ukusetshenziswa kwama-insulin amafushane kusetshenziswa kabanzi emkhakheni wokwakha umzimba, ngoba umphumela wezidakamizwa uyefana nesenzo sama-anabolic steroid. Iqiniso ukuthi i-hormone idlulisa i-glucose ibe izicubu zemisipha, okuholela ekunyukeni kwayo kwevolumu.
Kuyafakazelwa ukuthi ukusetshenziswa okunjalo kufanele kwenzeke "ngokuqonda", ngoba ukusebenza kwe-insulin kufaka phakathi ukudluliswa kwama-monosaccharides hhayi kuphela emisipha, kodwa futhi nakwezicubu ze-adipose. Ukusebenza ngokungaphumeleli kungaholela hhayi ekwakheni izicubu zomzimba, kepha ukukhuluphala okuvamile. Ngakho-ke, umthamo wezidakamizwa wabadlali, kanye nabantu abagulayo, ukhethwa ngamunye. Kungcono ukuthatha ikhefu izinyanga ezine ngemuva kwezinyanga ezimbili umjovo.
Iseluleko Sokusetshenziswa Kokusebenzisa Nezimpawu Zokusebenzisa
Kufanele unake imithetho yokugcinwa kwe-insulin nezimpawu zayo. Kuzo zonke izinhlobo zezilwane, ziyefana:
Izindlwana nama-cartridge kufanele agcinwe esiqandisini (hhayi efrijini!). Kungcono ukuthi uzibeke emnyango.
Izidakamizwa kufanele zivalwe kuphela.
Ngemuva kokuthi umuthi uvule, ungasetshenziswa zingakapheli izinsuku ezingama-30.
Umkhiqizo kumele uhanjiswe ukuze ukuthintana ngqo nelanga kungenzeki. Lokhu kubhubhisa ama-molecule ama-hormone futhi kunciphise ukusebenza kwawo.
Ngaphambi kokusebenzisa umuthi, qiniseka ukubheka ukungabikho kwe-turbidity, sediment noma ama-flakes kusisombululo, impilo yeshalofu, izimo zokugcina.
Ukuhambisana nezeluleko zochwepheshe kuyisihluthulelo sempilo ephezulu yeziguli kanye nekhono lokuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga zesifo esikhona.